Imiyalo yokusetshenziswa kwezidakamizwa, ama-analogues, izibuyekezo > Ukuxilonga
I-Lyspro insulin biphasic (Insulin lispro biphasic)
I-Biphasic insulin lispro ingxube yokumiswa kwe-protamine kwe-insulin lispro (ukulungiswa kwe-insulin esezingeni eliphakathi nendawo) kanye ne-insulin lispro (ukulungiswa kwe-insulin esebenza ngokushesha). I-Lyspro insulin iyi-analogue ye-DNA ephindaphindayo ye-insulin yomuntu, kepha ngokuhlukile, inokulandelana okuphindayo kwe-proline kanye ne-lysine amino acid izinsalela ezikhundleni 28 no-29 ze-insulin B chain. I-Lyspro biphasic insulin inemiphumela ye-anabolic ne-anti-catabolic, ilawula i-glucose metabolism. Emisipha nakwezinye izicubu (ngaphandle kobuchopho), i-lyspro biphasic insulin isheshisa ukuguqulwa kwama-amino acid ne-glucose esitokisini, ikhulisa okuqukethwe kwe-glycogen, okunamafutha, ne-glycerol, ukusetshenziswa kwe-amino acid, ukuthuthukisa ukwakheka kwamaprotheni, kuvimbela i-gluconeogenesis, i-glycogenolysis, ukukhipha i-ketogenesis, i-lipolysis ama-amino acid, akhuthaza ukwakheka kwe-glycogen kusuka kushukela esibindini, kuvuselela ukuguqulwa kweglucose ngokweqile ibe ngamafutha. I-Lyspro insulin biphasic ilingana ne-insulin yabantu. I-Lyspro insulin biphasic uma iqhathaniswa ne-insulin ejwayelekile yomuntu iboniswa ukuqala kwezenzo okusheshayo, ukuqala kwangaphambilini kwesenzo sokuphakeme nesikhathi esifushane somsebenzi we-hypoglycemic (kufika emahoreni angama-5). I-insulin ye-Lyspro biphasic insulin inamazinga amaningi okufaka kanye ukuqala ngokushesha (imizuzu eyi-15 ngemuva kokuphatha), iyakuvumela ukuba ihanjiswe ngokushesha ngaphambi kokudla (imizuzu eyi-15), i-insulin ejwayelekile yabantu ihanjiswa ngesigamu sehora. Ukuqala kwesenzo kanye nesilinganiso sokufakwa kwe-insulin ye-lyspro biphasic kungathonywa ukukhethwa kwesiza sokuphatha nezinye izinto. Umphumela omkhulu we-insulin lyspro biphasic ubonwa phakathi kwamahora ayi-0,5 no-2,5, ubude besikhathi sokusebenza bungamahora amathathu kuya kwayi-4.
Ukuphelela kokumunca kanye nokuqala komphumela we-lyspro biphasic insulin kuncike kwisayithi lomjovo (ithanga, isisu, amabhuzu), umthamo we-insulin olawulwa, ukuhlushwa kwe-insulin lapho kulungiswa nezinye izinto. I-Lyspro insulin biphasic isatshalaliswa ngokungalingani kuwo wonke izicubu. I-insulin ye-Lyspro biphasic insulin ayinqamuleli isithiyo se-placental futhi ingene ebisini lwebele. I-Lyspro biphasic insulin ibhujiswa yi-insulinase ikakhulukazi esibindini nasezinso. Ivezwa yizinso (30 - 80%).
Thayipha isifo sikashukela sohlobo loku-1, ikakhulukazi ngokungabekezeleli ezinye izinkomba, i-postprandial hyperglycemia, engeke ilungiswe ngamanye ama-insulin: ukumelana okungatheni kwe-insulin okushubile (ukusheshisa kokuwohloka kwendawo kwe-insulin).
Thayipha isifo sikashukela sohlobo 2 ngokufakwa okungafanele kwezinye i-insulin, ngokumelana nemithi ye-hypoglycemic yomlomo, nokuhlinzwa, izifo ezenzeka phakathi.
Indlela yokusebenzisa i-insulin lyspro biphasic kanye nomthamo
I-Lyspro biphasic insulin ilawulwa ngokungaziphathi. Umthamo usethwe ngokwahlukile kuye ngezinga le-glycemia.
Ukufakwa kumele kwenziwe ngokungenasici emahlombe, emaqhugwaneni, okhalweni nasiswini. Iziza zomjovo kufanele zishintshwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe kungabikho kanye ngenyanga. Ngokuphathwa kwe-subcutaneous, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuze kungangeni emgodini wegazi. Ngemuva komjovo, indawo yomjovo akufanele ihlanjululwe.
Ukuphathwa kwe-intravenous kwe-insulin ye-lyspro biphasic akwamukeleki.
Uma kunesidingo, iLyspro biphasic insulin ingahanjiswa ngokuhambisana ne-sulfonylureas yokulawulwa komlomo noma ngamalungiselelo we-insulin isikhathi eside.
Ezigulini ezinesimo sokusebenza sokuphazamiseka kwezinso kanye / noma isibindi, ukugcwala kwe-insulin ejikelezayo kuyakhuphuka, futhi isidingo saso singehliswa, ngakho-ke, kubalulekile ukulawula ngokucophelela izinga le-glycemia futhi ulungise umthamo we-insulin.
Kuyadingeka ukulandela ngokucophelela umthamo nendlela yokuphatha okuhloselwe ifomu lomthamo elisetshenzisiwe.
Lapho udlulisela iziguli kusuka ku-insulin esebenza ngokushesha esukela kwimvelaphi yezilwane iye kwi-lyspro biphasic insulin, ukulungiswa kwamthamo kungadingeka. Ukudluliselwa kwesiguli kolunye uhlobo noma ukulungiswa kwe-insulin enegama elihlukile lokuhweba kufanele kwenzeke ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha. Ukudluliselwa kweziguli ezithola i-insulin ngethamo lansuku zonke lama-IU angaphezu kwayikhulu kusuka kuhlobo oluthile lwe-insulin kuya kolunye kufanele kwenziwe esibhedlela. Izinguquko emsebenzini, umenzi, uhlobo, izinhlobo, kanye / noma indlela yokukhiqiza ye-insulin zingadinga ukulungiswa kwamthamo.
Izimpawu zezimbangi ze-hypoglycemia ngesikhathi sokuphathwa kwe-insulin yabantu kwezinye iziguli zingabizwa kakhulu noma zihluke kulezo ezabonakala ngesikhathi sokuphathwa kwe-insulin yezilwane. Ngokujwayezwa okujwayelekile kwamazinga kashukela egazini, ngokwesibonelo, ekwelashweni okukhulu nge-insulin, zonke noma izimpawu ezithile zangaphambi kwe-hypoglycemia zingashabalala, mayelana nokuthi yiziphi iziguli okufanele zaziswe ngazo. Izimpawu zezimbangi ze-hypoglycemia zingase zingabizwa kakhulu noma zishintshe ngenkambiso yesikhathi eside yesifo sikashukela i-mellitus, i-neuropathy yesifo sikashukela, ukwelashwa nezinye izidakamizwa.
Ukusetshenziswa kwemithamo enganele noma ukuhoxisa ukwelashwa, ikakhulukazi ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, kungaholela ku-hyperglycemia ne-ketoacidosis yesifo sikashukela (isimo esisongela impilo).
Isidingo se-insulin singakhuphuka ngokuxineka okungokomzwelo, izifo ezithathelwanayo, ukukhuphuka kwenani lama-carbohydrate ekudleni, ukusetshenziswa okwengeziwe kwezidakamizwa ezinomsebenzi we-hyperglycemic (glucocorticosteroids, ama-hormone e-thyroid, ama-thiazide diuretics, izakhi zomlomo wesibeletho nabanye).
Isidingo se-insulin singehla ngokuncipha kwenani lama-carbohydrate ekudleni, isibindi kanye / noma ukwehluleka kwe-renal, ukungasebenzi kwe-adrenal gland, i-pituitary noma i-thyroid gland, ukukhuphuka komzimba okwenziwe, ukusetshenziswa okwengeziwe kwezidakamizwa ezinomsebenzi we-hypoglycemic (i-beta-blockers engafani, i-monoamine oxidase inhibitors, i-sulfonamides kanye abanye).
Ukulungiswa komthamo we-insulin kungadingeka futhi ngokwanda komzimba noma ngokushintsha kokudla okujwayelekile.
Iziguli ezinesifo sikashukela zingamisa i-hypoglycemia emnene abazizwa ngayo ngokudla ushukela nokudla okuphezulu kuma-carbohydrate (kufanele uhlale unoshukela okungenani ongu-20 g). Mayelana ne-hypoglycemia edlulisiwe kufanele yatshelwe udokotela ozobakhona, ukuxazulula inkinga yesidingo sokulungiswa kwezokwelapha.
Lapho usebenzisa i-insulin lyspro biphasic kanye namalungiselelo eqembu le-thiazolidinedione, ingozi yokuthuthuka kwe-edema kanye nokwehluleka kwenhliziyo okuhlala njalo iyanda, ikakhulukazi ezigulini ezine-pathology yesistimu yenhliziyo kanye nokuba khona kwezinto zobungozi zokuhluleka kwenhliziyo okungapheli.
Nge-hyperglycemia noma i-hypoglycemia esigulini, ukushesha kokuphendula kwengqondo nokugxilisa ukunaka kungancipha, kungaba yingozi ezimeni lapho la makhono ebaluleke kakhulu (ngokwesibonelo, ukushayela imoto, izindlela). Iziguli kumele zithathe izinyathelo zokuvikela ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia noma i-hyperglycemia lapho zenza imisebenzi edinga ukunakwa okwandisiwe nesivinini sokuphendula kwengqondo (kufaka phakathi ukushayela, izindlela).Yini ebaluleke kakhulu ezigulini ezikhula njalo nge-hypoglycemia noma ngezimpawu ezingekho noma ezithambile, izisusa ze-hypoglycemia. Ezimweni ezinjalo, udokotela kufanele ahlole ukuthi kungenzeka yini kwesiguli esenza imisebenzi edinga ukunakwa okwandisiwe nesivinini sokuphendula kwengqondo (kubandakanya nokushayela, izindlela)
Isenzo sepulazi. Ingxube ye-lyspro insulin - ukulungiswa kwe-insulin esebenza ngokushesha kanye nokumiswa kwe-protamine ye-lyspro insulin - ukulungiswa kwe-insulin esezingeni eliphakathi nendawo. I-Lyspro insulin iyi-analogue ephindaphindayo ye-insulin yomuntu; ihluke kuyo ngokulandelana okuphindayo kwe-proline kanye ne-lysine amino acid izinsalela ezikhundleni 28 no-29 ze-insulin B chain. Ilawula umsoco we-glucose, inemiphumela ye-anabolic. Emisipha nakwezinye izicubu (ngaphandle kobuchopho) kusheshisa ukuguquguquka kwe-glucose nama-amino acid esiseleni, kugqugquzela ukwakheka kwe-glycogen kusuka glucose esibindini, kucindezele i-gluconeogeneis futhi kuvuse ukuguqulwa kweglucose ngokweqile ibe ngamafutha. Ukulingana ne-insulin yomuntu. Uma kuqhathaniswa ne-insulin ejwayelekile yomuntu, iboniswa ukuqala kwezenzo okushesha, ukuqala kwangaphambilini kwesenzo sokuphakeme kanye nesikhathi esifushane somsebenzi we-hypoglycemic (kufika emahoreni angama-5). Ukuqalwa okusheshayo kwesenzo (imizuzu eyi-15 ngemuva kokuphathwa) kuhlotshaniswa nezinga lokumunca okukhulu futhi likuvumela ukuthi kuphathwe ngokushesha ngaphambi kokudla (imizuzu eyi-15) - i-insulin ejwayelekile yomuntu ilawulwa ngemizuzu engama-30. Ukukhethwa kwesayithi lomjovo kanye nezinye izinto kungathinta izinga lokufakwa kanye nokuqala kwesenzo salo. Umphumela omkhulu ubonwa phakathi kwamahora we-0.5 no-2,5, isikhathi sokusebenza amahora angama-3-4.
Izinkomba. Thayipha isifo sikashukela sohlobo loku-1, ikakhulukazi ngokungabekezeleleki kwamanye ama-insulin, i-postprandial hyperglycemia engalungiswa ngamanye ama-insulin: ukumelana okungatheni kwe-insulin okushubile (ukusheshisa kokuwohloka kwendawo kwe-insulin). Uhlobo 2 sikashukela i-mellitus - ezimweni zokumelana nemithi ye-hypoglycemic yomlomo, ngokwephula ukutholwa kwamanye ama-insulin, ngesikhathi sokuhlinzwa, izifo ezithinta umzimba.
Contraindication I-Hypersensitivity, hypoglycemia, insulinoma.
Umthamo Umthamo unqunywa ngamunye ngokuya ngezinga le-glycemia.
Ingxube ye-25% ye-insulin lispro ne-75% yokumiswa kwe-protamine kufanele iphathwe kuphela / s, ngokuvamile imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla.
Uma kunesidingo, ungangena ngokuhambisana namalungiselelo we-insulin isikhathi eside noma ne-sulfonylureas yokulawulwa komlomo.
Ukufakwa kufanele kwenziwe s / c emahlombe, okhalweni, ezinkalweni noma esiswini. Izindawo zokujova kumele ziguqulwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe isikhathi esingaphezu kwesingu-1 ngenyanga. Ngokuphathwa kwe-s / c, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuze kungangeni emgqonyeni wegazi.
Ezigulini ezinokwehluleka kwe-renal kanye / noma kwesibindi, izinga le-insulin ejikelezayo liyakhuphuka, futhi isidingo salo singencishiswa, esidinga ukubhekwa ngokucophelela kwezinga le-glycemia nokulungiswa kwamthamo kwe-insulin.
Umphumela wecala. Imiphumela yokungezwani komzimba (urticaria, angioedema - umkhuhlane, ukuphefumula, ukuncipha kwegazi), i-lipodystrophy, amaphutha wokuphindaphindeka (ngokuvamile kwiziguli ezingakaze zithole i-insulin ngaphambilini), hypoglycemia, hypoglycemic coma.
Ukweqisa. Izimpawu: ukubulala, ukubabaza, ukujuluka ngokweqile, ukubanjwa kwamathambo, ukwethuka, indlala, ukukhathazeka, i-presthesias emlonyeni, ukufiphala kwesikhumba, ikhanda, ukuthuthumela, ukuhlanza, ukozela, ukuqwasha, ukwesaba, imizwa ecindezelekile, ukungasebenzi, ukuziphatha okungajwayelekile, ukungaqiniseki kokunyakaza, ukukhubazeka kwenkulumo nombono, ukudideka, i-hypoglycemic coma, ukwehluleka.
Ukwelashwa: uma isiguli sazi, i-dextrose ichazwe ngomlomo, s / c, iv noma i-glucagon ejova noma isixazululo se-hypertonic dextrose.Ngokukhula komqondo we-hypoglycemic coma, u-20- 40 ml (kuze kufike ku-100 ml) wesisombululo se-dextrose esingu-40% ufakwa ngaphakathi emfudlaneni ungene ezigulini kuze kube yilapho isiguli siphuma ebunzini.
Ukuxhumana. Kwezemithi akuhambisani nezixazululo zezinye izidakamizwa.
Umphumela we-hypoglycemic uthuthukiswa ngama-sulfonamides (kufaka phakathi izidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo, i-sulfonamides), i-MAO inhibitors (kufaka phakathi i-furazolidone, i-procarbazine, selegiline), i-inhibitors ye-carbonic anhydrase, inhibitors ye-ACE, ama-NSAIDs (kufaka phakathi ama-salicylates), i-anabolic (kufaka phakathi i-stanozolol, oxandrolone, methandrostenolone), androgens, bromocriptine, tetracyclines, Clofibrate, ketoconazole, mebendazole, theophylline, cyclophosphamide, phenfluramine, Li + amalungiselelo, i-pyridoxine, i-quinidine, i-quinine, i-chloro.
imiphumela hypoglycemic ka glucagon kahle, ozokusebenzisa, corticosteroids inzalo temlomo, estrogens, thiazide futhi loop isisu, amahomoni BCCI, yegilo, heparin, sulfinpyrazone, sympathomimetics, danazol, tricyclics, clonidine, i-calcium abamelene, diazoxide, morphine, insangu, i-nicotine phenytoin, ama-epinephrine blockers H1ama-histamine receptors.
Ama-Beta-blockers, i-reserpine, i-octreotide, i-pentamidine angathuthukisa futhi enze buthaka umphumela we-hypoglycemic we-insulin.
Imiyalo ekhethekile. Indlela yokuphatha ehloselwe ifomu lomthamo elisetshenzisiwe kufanele ibhekwe ngokuqinile.
Lapho udlulisela iziguli kusuka ku-insulin esebenza ngokushesha esukela kwimvelaphi yezilwane iye kwi-insulin lispro, ukulungiswa kwamthamo kungadingeka. Ukudluliselwa kweziguli ezithola i-insulin edosi yansuku zonke edlula i-100 IU kusuka ohlotsheni olulodwa lwe-insulin kuyanconywa ukuba kwenziwe esibhedlela.
Isidingo se-insulin singakhula ngesikhathi sesifo esithathelwanayo, kanye nokuxineka ngokomzwelo, kanye nokwenyuka kwesibalo sama-carbohydrate ekudleni, ngesikhathi sokudla okungeziwe kwezidakamizwa ezinomsebenzi we-hyperglycemic (amahomoni we-thyroid, i-GCS, inzalo yokuvimbela inzalo ngomlomo, i-thiazide diuretics).
Isidingo se-insulin singehla ngokwe-renal kanye / noma ukwehluleka kwesibindi, ngokuncipha kwenani lama-carbohydrate ekudleni, ngomfutho owengeziwe wokuzivocavoca, ngesikhathi sokudla okungeziwe kwezidakamizwa ngomsebenzi we-hypoglycemic (MAO inhibitors, beta-blockers abangaqokile, i-sulfonamides).
Ukuthambekela kokuthuthukisa i-hypoglycemia kungalimaza ikhono leziguli ukubamba iqhaza ngenkuthalo traffic, kanye nokugcinwa kwemishini kanye nemishini.
Iziguli ezinesifo sikashukela zingamisa i-hypoglycemia encane ezwa yizo ngokudla ushukela noma ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate (kunconywa ukuthi uhlale unoshukela okungenani ongu-20 g). Kuyadingeka ukwazisa udokotela oholayo mayelana ne-hypoglycemia edlulisiwe ukuxazulula inkinga yesidingo sokulashwa kwemithi.
Isidingo se-insulin sivame ukuncipha ku-trimester yokuqala yokukhulelwa futhi sikhuphuke kwesesibili - okwesithathu ama-trimesters. Ngesikhathi sokuzalwa kwengane futhi ngokushesha emva kwabo, isidingo se-insulin singehla kakhulu.
Irejista yezwe yemithi. Ukushicilelwa okusemthethweni: ngama-2 ama-v. M: Umkhandlu Wezokwelapha, 2009. - Vol 2, ingxenye 1 - 568 s., Ingxenye 2 - 560 s.
Ukumiswa kokuphathwa kwe-subcutaneous kwe-100 IU / ml 3 ml
I-1 ml yokumiswa iqukethe
into esebenzayo - insulin lispro 100 IU, (3.5 mg)
ababukeli: sodium hydrogen phosphate heptahydrate, glycerol, phenol liquid, methacresol, protamine sulfate, zinc oxide (ngokuya nge-Zn ++), isodium hydroxide 10% yesisombululo sokulungisa i-pH, noma i-10% hydrochloric acid yokulungisa i-pH, amanzi ngomjovo.
Ukumiswa kombala omhlophe, lapho kumi, kucwengeke kube yinto esobala, engenamibala noma ecishe ibe umbala ongenamibala kanye nompheme omhlophe. I-precipitate ivuselelwa kalula ngokunyakazisa okumnene
Imininingwane eminingi yokusetshenziswa kwe-insulin lispro ngesikhathi sokukhulelwa ikhombisa ukungabikho komphumela ongathandeki womuthi ekukhulelweni, isimo se-fetus kanye nesanda kuzalwa. Ngesikhathi sokukhulelwa, kubaluleke kakhulu ukulonda okuhle ezigulini ezithola ukwelashwa kwe-insulin. Isidingo se-insulin sivame ukwehla ku-trimester yokuqala yokukhulelwa futhi sanda kuma-trimesters wesibili nelesithathu. Ngesikhathi nangemva nje kokuzalwa, izidingo ze-insulin zingase zehle kakhulu. Iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zazise udokotela wazo ngokukhulelwa noma ukuhlela kwaso. Kwabesifazane abanesifo sikashukela i-mellitus, ukulungiswa kwamthamo kwe-insulin kanye / noma ukudla kungadingeka ngesikhathi sokuncelisa ibele.
Imiphumela emibi ye-insulin lyspro biphasic
Ukuvela kwe-allergic (redness, ukuvuvukala, ukulunywa endaweni yomjovo, i-angioedema, i-pruritus ejwayelekile, ubunzima bokuphefumula, ukukhuphuka kwenhliziyo, ukukhuphuka kwesithukuthezi, i-urticaria, umkhuhlane, ukuncipha kwegazi, ukufiphala komoya), i-lipodystrophy, i-edema, amaphutha wokuphindaphindeka okwesikhashana, i-hypoglycemia (kufaka phakathi ukufa).
Ukusebenzisana kwe-insulin lispro biphasic nezinye izinto
I-Lyspro insulin biphasic ayihambelani ngokwezixazululo nezinye izidakamizwa.
Umphumela we-hypoglycemic we-lyspro biphasic insulin ukhuliswa ngama-sulfonamides (kufaka phakathi izidakamizwa zomlomo ze-hypoglycemic, i-sulfanilamides), i-inhibitors ye-carbonic anhydrase, i-monoamine oxidase inhibitors (kufaka phakathi i-procarbazine, furazolidone, selegiline), i-angiotensin eguqula i-antioxidants ne-antioxidants. Ama-anabolic steroid (kufaka phakathi i-oxandrolone, i-stanozolol, i-methandrostenolone), ama-tetracyclines, i-capopril, i-enalapril, b omokriptin, clofibrate, mebendazole, ketoconazole, theophylline, fenfluramine, cyclophosphamide, lithium amalungiselelo, quinidine, octreotide, guanethidine, pyridoxine, yokwamukela abantu abamelene nani ka angiotensin II, chloroquine, i-quinine, Ethanol futhi etanolsoderzhaschie izindlela.
Umphumela we-hypoglycemic we-lyspro biphasic insulin wehliswa amandla yi-somatropin, i-glucagon, i-glucocorticosteroids, ama-estrogens, izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, izivimbamgwaqo ezihamba kancane ze-calcium, i-thiazide ne-loop diuretics, ama-hormone e-thyroid, i-sulfin pyrazone, i-hepatin, i-sympathomimetas i-calcium, i-morphine, i-nicotine, insangu, i-phenytoin, i-chlorprotixen, i-salbutamol, i-terbutaline, i-ritodrin, i-nicotinic acid, i-H1-histamine receptor blockers, ikhiqiza dnye phenothiazines, i-isoniazid, epinephrine.
Ama-Beta-blockers, i-octreotide, i-reserpine, i-pentamidine angathuthukisa futhi enze buthaka umphumela we-hypoglycemic we-lyspro biphasic insulin.
Ama-ejenti we-Beta-adrenergic blocking agents, i-clonidine, i-reserpine, lapho isetshenziswa ndawonye ne-biphasic insulin lyspro, angafihla ukubonakaliswa kwezimpawu ze-hypoglycemia.
Uma kudingekile ukusebenzisa imishanguzo nge-lyspro biphasic insulin, thintana nodokotela wakho.
Uma kwenzeka okweqisa okweqile kwe-insulin ene-lyspro biphasic, i-hypoglycemia ikhula, ehambisana nalezi zimpawu ezilandelayo: ukujuluka, ukubabaza, ukujuluka okuthe xaxa, ukuthuka ngokweqile, i-tachycardia, i-palpitations, ukuthuthumela, ukukhathazeka, indlala, i-paresthesia emlonyeni, ikhanda, isikhumba esidabukile, ukozela, ukuthuthumela, ukugabha, ukuqwasha, imizwa yokudangala, ukwesaba, ukungahambi kahle, ukungavikeleki kokunyakaza, ukungajwayelekile kokuziphatha, ukukhuluma kanye nokuphazamiseka kombono, ukudideka, ukukhishwa inyumbazane, ukukhohlakala kwe-hypoglycemic (ukubulala kungenzeka umphumela th).Ngaphansi kwezimo ezithile, ngokwesibonelo, isikhathi eside sesi sifo noma ukuqashwa kakhulu kwesifo sikashukela, izimpawu zezimbangi ze-hypoglycemia zingashintsha.
I-hypoglycemia emaphakathi imvama ingaqedwa ngokufakwa ushukela noma ushukela, futhi kungadingeka ukuthi uguqule umthamo we-insulin, umsebenzi ngokomzimba noma ukudla. Ukulungiswa kwe-hypoglycemia elinganiselayo kungenziwa kusetshenziswa ukuphathwa kwe-glucagon kwe-subcutaneous noma intramuscular, ngokufakwa ngaphakathi kwe-carbohydrate. Izimo ezinzima ze-hypoglycemia zimiswa ukuphathwa kwe-glucagon noma kwe-subcutaneous kwe-glue glucose, ne-hypoglycemic coma, 20 - 40 ml (kuze kufike ku-100 ml) wesisombululo se-dextrose esingu-40%. Ngemuva kokuthola ukwazi kabusha, isiguli kufanele sinikezwe ukudla okunama-carbohydrate ukuze kugwemeke ukwakhiwa kabusha kwe-hypoglycemia. Ukudonswa okwengeziwe kwe-carbohydrate kanye nokuqapha isiguli kungadingeka, ngoba ukubuyela emuva kwe-hypoglycemia kungenzeka.
Igama lokuhweba lesidakamizwa yiHumalog Mix. Kususelwa ku-analogue ye-insulin yabantu. Into inomphumela we-hypoglycemic, isiza ukusheshisa ukucubungula i-glucose, futhi futhi ilawula nenqubo yokukhishwa kwayo. Ithuluzi yisixazululo somjovo wezigaba ezimbili.
Ngaphezu kwento esebenzayo, ukwakheka kuqukethe izinto ezinjengalezi:
i-sodium hydroxide ngendlela yesisombululo (noma i-hydrochloric acid),
sodium heptahydrate hydrogen phosphate,
Ukuze usebenzise lo muthi, udinga ukuqokwa kukadokotela ngemiyalo eqondile. Akwamukeleki ukuthi uguqule umthamo noma i-schedule ozosebenzisa wedwa.
Isenzo se-Pharmacological kanye nezinkomba
Isenzo salolu hlobo lwe-insulin siyefana nezinye izidakamizwa eziqukethe i-insulin. Ukungena emzimbeni, into esebenzayo ixhumana nama-membranes amaseli, ngaleyo ndlela ivuselele ukumuncwa kweglucose.
Inqubo yokumuncwa kwayo kusuka ku-plasma nokusatshalaliswa ngaphakathi kwezicubu iyasheshiswa. Le yindima ye-insulin Lizpro ekuphatheni ushukela.
Isici sesibili somphumela waso emzimbeni ukwehla komkhiqizo we-glucose ngamaseli wesibindi. Kulokhu, inani elinoshukela ngokweqile alingeni egazini. Ngokusho kwalokhu, kungashiwo ukuthi umuthi weHumalog unomphumela we-hypoglycemic ezindaweni ezimbili.
Lolu hlobo lwe-insulin lubamba ngokushesha futhi luqala ukusebenza imizuzu eyi-15 ngemuva komjovo. Lokhu kusho ukuthi le nto idonswa ngokushesha ngumzimba. Ngenxa yalesi sici, kuvunyelwe ukusebenzisa umuthi cishe ngaphambi kokudla.
Izinga lokumunca lithintwa yindawo yomjovo. Ngakho-ke, udinga ukwenza imijovo, ugxile emiyalweni yomuthi.
Kubalulekile futhi ukulandela izincomo zeLizpro insulin lapho unquma ukusetshenziswa kwayo. Umuthi unomphumela oqinile, ngakho-ke ukusetshenziswa kwawo kuvunyelwe kuphela ngokuya izinkomba. Uma usebenzisa lo muthi ngokungadingekile, ungadala umonakalo omkhulu empilweni yakho.
Izinkomba zokuqokwa kweHumalog zifaka:
uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela
I-hyperglycemia, izimpawu zazo ezingahambelani nokusetshenziswa kwezinye izidakamizwa,
uhlobo lwesibili lwesifo sikashukela (lapho kungekho khona imiphumela yokusetshenziswa kwezidakamizwa ukuphatha ngomlomo),
ukuhlela kokuhlinzwa kwabanesifo sikashukela,
ukuvela kwezimo ezingahleliwe ze-pathological ezidala ushukela,
olunye uhlobo lokungabekezeleli i-insulin.
Kodwa noma ngabe kunezinkomba zokuphuza lo muthi, udokotela kufanele ahlole isiguli futhi aqiniseke ukuthi akukho yini ukungqubuzana nokufaneleka kwalolo hlobo lokwelashwa.
I-Humalog yakhiqizwa ngendlela yesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous (iv) ne-subcutaneous (s / c): engenabala, esobala (emigqobeni ka-3 ml, kwiphakethe elinezimpahla ezinamabhokisi angama-5, kwibhodi yamakhadibhodi e-1 blister pack, kuma-syringe amapeni e-QuickPen amakhadibhodi aqukethe i-3 ml yesisombululo afakwa kwiphakethe lekhadibhodi yamapeni ama-5 wesirinji).
Ukwakheka kwe-1 ml yesisombululo:
into esebenzayo: insulin lispro - 100 ME,
izinto ezisizayo: amanzi wokujova - aze afike ku-1 ml, isisombululo se-sodium hydroxide 10% kanye (noma) nesixazululo se-hydrochloric acid 10% - aze afike ku-pH 7-8, i-sodium hydrogen phosphate heptahydrate - 0,00188 g, i-zinc oxide - ye-Zn ++ 0.000 0197 g , i-metacresol - 0.00315 g, glycerin (glycerol) - 0,016 g.
Umthamo wesidakamizwa unqunywa udokotela ngokwahlukana, kucatshangelwa ukugcwala kweglucose egazini.
Isixazululo sifakwa iv - uma kunesidingo, ezimweni ze-puteacosis eziyingozi kakhulu, i-ketoacidosis, phakathi kokusebenza nesikhathi sokusebenza, s / c - ngendlela yemijovo noma nge-infusions enwetshiwe (ngepampu ye-insulin) esiswini, enkalweni, okhalweni noma ehlombe, hhayi ukuvumela umkhiqizo ukuthi ungene emithanjeni yegazi. Izindawo zokujova ziyaguqulwa isikhathi ngasinye, ukuze indawo efanayo isetshenziswe isikhathi esingaphezu kweyodwa ngenyanga. Ngemuva kokuphathwa, indawo yomjovo ayikwazi ukwenziwa.
Esimweni ngasinye, indlela yokuphatha isethwe ngokuhlukile. Isingeniso senziwa ngaphambi kokudla, kepha ukusetshenziswa kwesidakamizwa kuvunyelwe ngemuva kokudla.
Ukulungiselela ukuphathwa kwezidakamizwa
Ngaphambi kokusetshenziswa, isixazululo sihlolwa endabeni ye-particrate, turbidity, stain kanye nokuqina. Sebenzisa kuphela isixazululo esingenamibala nesicacile ekushiseni kwegumbi.
Ngaphambi komjovo, geza izandla zakho kahle, ukhethe bese usula indawo yomjovo. Ngokulandelayo, ikepusi lisuswa ngenaliti, isikhumba sikhishwe noma sibuthelwe esibayeni esikhulu, inaliti ifakwa kuyo bese inkinobho icindezelwa. Ngemuva kwalokho, inaliti iyasuswa futhi imizuzwana embalwa indawo yomjovo icindezelwa ngokucophelela nge-swab yekotini. Ngokusebenzisa isivalo senalithi iyaphendulwa ilahlwe.
Ngaphambi kokusebenzisa i-Humalog in pen-injector (injektha), i-QuickPen kufanele ifunde imiyalo esetshenzisiwe.
Imijovo ye-IV yenziwa ngokuya ngomkhuba ojwayelekile wemitholampilo, ngokwesibonelo, umjovo we-IV bolus noma ngohlelo lokufaka. Ukuqapha njalo ukuhlushwa kweglue glucose kubalulekile.
Ukuqina kohlelo lokufakwa nge-0,1-1 IU nge-1 ml ye-insulin lispro ku-5% dextrose noma ku-0.9% sodium chloride solution yezinsuku ezi-2 kunikezwa lapho kugcinwa khona izinga lokushisa lasekamelweni.
Ukuze wenze infusions we-sc, amaphampu we-Disetronic kanye ne-Minimed enzelwe i-insulin infusions angasetshenziswa. Kubalulekile ukulandela ngokuqinile imiyalo yomenzi futhi ulandele imithetho ye-asepticism lapho uxhuma uhlelo. Njalo ngezinsuku ezi-2 ziguqula uhlelo lokumiliselwa. Ukufakwa nesiqephu se-hypoglycemic kumiswa kuze kuxazululwe. Ezimweni zokugxila okuncane kakhulu kwe-glucose egazini, isiguli kufanele sibonane nodokotela ukuze acabangele ukunciphisa noma ukumisa ukumakwa kwe-insulin.
Ukukhuphuka okusheshayo kokuxineka koshukela egazini kungabhekwa ngohlelo oluvinjiwe lokufaka noma lokungasebenzi kahle kwephampu. Uma ukwephulwa kokulethwa kwe-insulin kusolwa njengesizathu sokwanda kokuhlungwa kwe-glucose, isiguli kufanele silandele imiyalo yomenzi futhi sazise udokotela (uma kunesidingo).
I-Humalog uma usebenzisa iphampu ayikwazi ukuxutshwa neminye insulin.
Ipeni le-insulin ye-QuickPen liqukethe i-3 ml yesidakamizwa nomsebenzi we-100 IU ku-1 ml. Ama-1-60 amayunithi we-insulin anganikezwa ngomjovo ngamunye. Umthamo ungasetwa ngokunemba kweyunithi elilodwa. Uma amayunithi amaningi esunguliwe, umthamo ungalungiswa ngaphandle kokulahleka kwe-insulin.
Umjovo kufanele usetshenziswe yisiguli esisodwa kuphela, kufanele kusetshenziswe izinaliti ezintsha ngomjovo ngamunye. Musa ukusebenzisa umjovo uma ezinye izingxenye zalo zilimele noma ziphukile. Isiguli kufanele ngaso sonke isikhathi siphathe umjovo wokugcina uma kungenzeka ulahlekelwe noma ulimale.
Iziguli ezinombono ophelele noma ukulahleka kombono azinconywa ukuba zisebenzise umjovo ngaphandle kosizo lwabantu ababona kahle abaqeqeshelwe ukuyisebenzisa.
Ngaphambi komjovo ngamunye, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi usuku lokuphelelwa isikhathi olukhonjelwe kwelebula aluphelelwe yisikhathi nokuthi uhlobo olufanele lwe-insulin luqukethe umjovo. Kulokhu, akukanconywa ukususa ilebula kuyo.
Umbala wenkinobho yedosi elisheshayo yepeni yesirinji ye-sypinge ungwevu, uhambelana nombala wethebula kwilebula yakhe nohlobo lwe-insulin esetshenzisiwe.
Ngaphambi kokusebenzisa umjovo, kufanele uqiniseke ukuthi inaliti inamathele kuyo ngokuphelele. Ngemuva kokusetshenziswa, inaliti iyasuswa futhi ilahlwe. Ipeni lesirinji alikwazi ukugcinwa ngenalithi enamathiselwe kulo, ngoba lokhu kungadala ukuthi kube nama-Bubble womoya ekhabethe lezidakamizwa.
Lapho kunquma umthamo womuthi odlula amayunithi angama-60, kwenziwa imijovo emibili.
Ukuze ubheke izinsalela ze-insulin ebhokisini, udinga ukukhomba umjovo ngensipho yenaliti up ubone inani lamayunithi asele e-insulin esikalini kumgcini we-cartridge obonakalayo. Le nkomba ayisetshenziselwa ukusetha umthamo.
Ukuze ususe i-cap kubva kumjovo, udinga ukuwudonsa. Uma kuvela noma ibuphi ubunzima, zungeza ngokucophelela i-cap ngewashi ne-counterclockwise, bese uyidonsa.
Isikhathi ngasinye ngaphambi kokujova, bahlola ukungena kwabo kwe-insulin, ngoba ngaphandle kwawo ungathola i-insulin encane kakhulu noma ngokweqile. Ukuhlola, susa ikhebula elingaphandle nelingaphakathi lenaliti, ngokujikeleza inkinobho yomthamo, amayunithi ama-2 asethelwe, umjovo uqondiswa phezulu bese ungqongqozwa ophethe ikhareji ukuze wonke umoya uqoqe engxenyeni ephezulu. Bese ucindezela inkinobho yomthamo ize iyeke bese inombolo engu-0 ivela efasiteleni elibonisa inkomba. Ukubamba inkinobho kusikhundla esibuyiselwe emuva, ukubala kancane ukuya ku-5, ngalesi sikhathi iqhinga le-insulin kufanele libonakale ekugcineni kwenalithi. Uma ukuvela kwe-insulin kungaveli, inaliti ithathelwa indawo entsha bese kwenziwa kabusha.
khipha cap esibayeni sepipi
ngesilabhisi oswakanyiswe ngotshwala, sula i-disc yerabha ekugcineni kwesiphathi senqola,
faka inaliti ku-cap ngqo kwi-eksisi yomjovo bese uyikroba kuze kube yilapho inamathele ngokuphelele,
ngokujikeleza inkinobho yedosi, inombolo edingekayo yamayunithi isethwe,
khipha isigaxa senaliti bese uyifaka ngaphansi kwesikhumba,
ngesithupha sakho, cindezela inkinobho yomthamo ize ime ngokuphelele. Ukufaka umthamo ophelele, bamba inkinobho bese ubala kancane ukuya ku-5,
inaliti isuswa ngaphansi kwesikhumba,
hlola inkomba yomthamo - uma inenombolo engu-0 kuyo, umthamo ufakwa ugcwele,
faka ngokucophelela isicucu esingaphandle kwenaliti bese usikhulula kumjozi, bese usilahla,
faka isicoco esibayeni sesirinji.
Uma isiguli singabaza ukuthi uyikhiphe ngokugcwele leyo dosi, akufanele iphindwe kabili.
kungenzeka: i-lipodystrophy, ukusabela komzimba kwendawo - ukuvuvukala, ubomvu noma ukulunywa endaweni yomjovo,
kuyaqabukela: ukusabela okujwayelekile komzimba - ukukhuphuka kokujuluka, i-tachycardia, ukuncipha kwegazi, ukushesha komoya, umkhuhlane, i-angioedema, i-urticaria, ukulunywa komzimba wonke.
Ukudluliselwa kwesiguli kwelinye igama lomkhiqizo noma uhlobo lwe-insulin lwenziwa ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha. Uma ushintsha indlela yokukhiqiza, izinhlobo, uhlobo, uhlobo lomkhiqizo kanye / noma umsebenzi, ukulungiswa kwamthamo kungadingeka.
Izimpawu ezibonisa ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia zingabizwa kancane futhi zinganakeki ngokuphathwa kakhulu nge-insulin, isikhathi eside sesifo sikashukela, izifo zesistimu yezinzwa ngokumelene nesifo sikashukela, kanye nokwelashwa kanyekanye ngezidakamizwa, ngokwesibonelo ukubethelwa kwe-beta-blocker.
Izimpawu zokuqala ze-hypoglycemia ezigulini ezinokusabela kwe-hypoglycemic ngemuva kokushintsha kusuka ku-insulin ethathwe ezilwaneni kuya e-insulin yomuntu zingaba zimbi kakhulu noma zihlukile kulezo ababenazo nge-insulin yangaphambilini ngesikhathi sokwelashwa.
Ezimweni zokusabela okungalungile kwe-hyperglycemic noma i-hypoglycemic, ukuthuthukiswa kokulahlekelwa ukwazi, ukoma, noma ukuqala kokufa kungenzeka. Ukusebenzisa umuthi ngemithamo enganele noma ekuyekeleni ukwelashwa, ikakhulukazi uhlobo lwe-ini yesifo sikashukela, kungaholela ekwakhiweni kwe-hyperglycemia kanye nesifo sikashukela sikashukela, okungenzeka kusongele impilo yeziguli.
Ngokunganeleki kwe-renal and hepatic, kunganciphisa isidingo se-insulin, esihambisana nokuncipha kwenqubo ye-insulin kanye nezinqubo ze-gluconeogeneis. Ekwehlulekeni kwesibindi okungapheli (ngenxa yokwanda kwe-insulin), ukucindezelwa okungokomzwelo, izifo ezithathelwanayo, ukukhuphuka kwenani lama-carbohydrate ekudleni, isidingo se-insulin singakhuphuka.
Ezimweni zezinguquko ekudleni okujwayelekile kanye nomsebenzi owengeziwe womzimba, ukulungiswa komthamo kungadingeka. Lapho wenza izivivinyo zomzimba ngokushesha ngemuva kokudla, kungenzeka ukwandisa ubungozi be-hypoglycemia. Ngenxa ye-chemacodynamics yabantu abasebenza ngokushesha kwe-insulin, i-hypoglycemia ingaqala ukukhula ngemuva kokujova kunasetshenziswa i-insulin yabantu.
Lapho unquma ukulungiswa kwe-insulin enenqwaba yama-40 IU ku-1 ml ngokwe-vial, akunakwenzeka ukuba kuthathe i-insulin ebhokisini nge-insulin okuhlushwa nge-100 IU ku-1 ml usebenzisa isirinji ukuphatha i-insulin nge-40 IU ngo-1 ml.
Ukwelashwa kanyekanye ngokulungiswa kwe-insulin nezidakamizwa zeqembu le-thiazolidinedione kukhulisa ubungozi bokukhula kwe-edema kanye nokwehluleka kwenhliziyo okungalapheki, ikakhulukazi ngokumelene nesizinda se-pathologies yesistimu yenhliziyo naphambi kwezici zobungozi zokuhluleka kwenhliziyo okungapheli.
Iziguli ngesikhathi sokwelashwa kufanele ziqaphele lapho zishayela izimoto futhi zenza imisebenzi enobungozi edinga ukunakwa okwandisiwe nesivinini sokuphendula kwengqondo.
Umphumela wezidakamizwa / izinto ku-insulin lispro enokwelashwa okuhlanganayo:
I-phenothiazine derivatives, i-nicotinic acid, i-lithium carbonate, isoniazid, diazoxide, chlorprotixene, thiazide diuretics, antidepressants, beta-2-adrenergic agonists (terbutaline, salbutamol, ritodrin, njll.), i-danazole, i-Gosterone ubukhulu bomphumela wayo we-hypoglycemic,
I-angiotensin II receptor antagonists, octreotide, angiotensin-converting enzyme inhibitors (enapril, Captopril), amanye ama-antidepressants (monoamine oxidase inhibitors), ama-sulfanilamide antibiotics izidakamizwa eziqukethe i-ethanol ne-ethanol, i-beta-blockers: yandisa ubulukhuni bomphumela wayo we-hypoglycemic.
ILyspro insulin ayihlanganisiwe ne-insulin yezilwane.
Ngaphambi kokuthatha ezinye izidakamizwa, kubalulekile ukubonana nodokotela. Ngokwesincomo sakhe, umuthi ungasetjenziswa ngokuhlanganiswa ne-insulin esebenza isikhathi eside komuntu noma ngezindlela zomlomo ze-sulfonylureas.
Ama-analogues weHumalog yi-Iletin I ejwayelekile, i-Iletin II ejwayelekile, i-Inutral SPP, Inutral HM, Farmasulin.
Yize iqiniso lokuthi ososayensi bakwazile ukuphindaphinda ngokuphelele le molekyuli ye-insulin ekhiqizwa emzimbeni womuntu, isenzo se-hormone saphenduka ukuthi sehliswe ngenxa yesikhathi esidingekayo sokufakwa kwegazi. Umuthi wokuqala wesenzo esithuthukisiwe kwakuyi-insulin Humalog. Kuqala ukusebenza sekudlule imizuzu eyi-15 ngemuva komjovo, ngakho-ke ushukela ovela egazini udluliselwa ezithanjeni ngendlela yesikhathi, futhi ngisho ne-hyperglycemia yesikhashana ayenzeki.
Kubalulekile ukwazi! Inoveli elulekwa abasebenza nge-endocrinologists ye Ukuqapha Okuqhubekayo Sikashukela! Kuyadingeka nsuku zonke.
Uma kuqhathaniswa nokufakelwa insulin kwabantu okwenziwe ngaphambilini, uHumalog ukhombisa imiphumela engcono: ezigulini, ukushintshashintsha koshukela nsuku zonke kuncishiswa ngama-22%, ama-glycemic indices ayathuthuka, ikakhulukazi ntambama, futhi amathuba okuba ne-hypoglycemia ebambezelekile kakhulu ancipha. Ngenxa yesenzo esisheshayo, kodwa esizinzile, le insulin isetshenziswa kakhulu kushukela.
Imiyalo yokusetshenziswa kwe-insulin Humalog is voluminous impela, futhi izigaba ezichaza imiphumela emibi nemikhombandlela yokusebenzisa ihlala ngaphezu kwesigaba esisodwa. Izincazelo ezinde ezihambisana neminye imishanguzo zibonwa yiziguli njengesixwayiso ngobungozi bokuzisebenzisa. Eqinisweni, konke kuyefana: umyalo omkhulu onemininingwane - ubufakazi bezilingo eziningi ukuthi umuthi wamelana ngempumelelo.
Isifo sikashukela nokucindezela kuzoba yinto yesikhathi esedlule
Isifo sikashukela siyimbangela ecishe ibe yi-80% yazo yonke imivimbo kanye nokunqunywa. Abantu abayi-7 kwabayi-10 bafa ngenxa yemithambo ye inhliziyo noma yobuchopho evalekile. Cishe kuzo zonke izimo, isizathu salesi siphelo esibi siyefana - ushukela wegazi ophezulu.
Ushukela ungafakwa futhi kufanele udilizwe phansi, ngaphandle kwalokho akukho lutho. Kepha lokhu akuselaphi lesi sifo uqobo, kepha kusiza kuphela ukulwa nophenyo, hhayi imbangela yalesi sifo.
Umuthi okuwukuphela kwawo onconywe ngokusemthethweni ukuthi welashwe isifo sikashukela futhi usetshenziswe yi-endocrinologists emsebenzini wabo.
Ukusebenza kahle kwalo muthi, kubalwa ngokwendlela ejwayelekile (inani leziguli elithole inani eliphelele leziguli eziseqenjini labantu abangu-100 abathole ukwelashwa):
Ukwehlela ushukela - 95%
Ukuqedwa kwe-vein thrombosis - 70%
Ukuqedwa kokushaya kwenhliziyo okuqinile - 90%
Ukuqeda umfutho wegazi ophakeme - 92%
Ukuqinisa usuku, ngcono ukulala ebusuku - 97%
Abakhiqizi abayona inhlangano yezentengiselwano futhi baxhaswa ngezimali zombuso. Ngakho-ke, manje wonke umhlali uthola ithuba.
I-Humalogue ivunyelwe ukusetshenziswa iminyaka engaphezu kwengu-20 edlule, manje sekungashiwo ngokuqiniseka ukuthi le insulin iphephile kumthamo ofanele. Kuvunyelwe ukuthi isetshenziswe ngabadala nezingane, singasetshenziswa kuzo zonke izimo, kuhambisana nokushoda kwamahomoni: uhlobo 1 nohlobo 2 sikashukela, ukuhlinzwa kwe-pancreatic.
Imininingwane ejwayelekile mayelana neHumalogue:
Incazelo Sula isixazululo. Kudinga izimo ezikhethekile zokugcina, uma zephulwa, zingalahlekelwa yimpahla yazo ngaphandle kokushintsha ukubukeka, ngakho-ke umuthi ungathengwa kuphela emakhemisi.
Isimiso sokusebenza Inikeza i-glucose ezicutshini, ithuthukisa ukuguqulwa kwe-glucose esibindini, futhi ivimbele ukuwohloka kwamafutha. Umphumela wehlisela ushukela uqala ngaphambi kwe-insulin esebenza ngokufushane, futhi ihlala incane.
Ifomu Isixazululo esinokuqoqwa kwe-U100, ukuphatha - okucashile noma okuphathekayo. Igcwele emabhokisini noma emapeni wesirinji ongasetshenziswa.
Umkhiqizi Isixazululo sikhishwa iLilly France, eFrance kuphela. Ukupakisha kwenziwa eFrance, e-USA naseRussia.
Intengo E-Russia, izindleko zephakethe eliqukethe ama-5 ama-cartridge we-3 ml lilinye licishe libe ngama-ruble ayi-1800. EYurophu, intengo yevolumu efanayo icishe ifane. E-US, le insulin icishe ibize izikhathi eziyi-10.
Thayipha isifo sikashukela esingu-1, kungakhathalekile ukuthi lesi sifo siqinile kangakanani.
Uhlobo 2, uma ama-hypoglycemic agents nokudla kungavumeli ukwenziwa kwe-glycemia kube yinsakavukela.
Thayipha 2 ngesikhathi sokukhulelwa, isifo sikashukela sokukhulelwa.
Zombili lezi zinhlobo zikashukela ngesikhathi sokwelashwa futhi.
Contraindication Ukusabela komuntu ngamunye kuma-insulin lyspro noma izingxenye ezisizayo. Kuvame ukuvezwa komzimba endaweni yomjovo. Ngobunzima obuphansi, kudlula isonto ngemuva kokushintshela kule insulin. Amacala amakhulu awavamile, adinga ukufaka i-Humalog ngama-analogues.
Izici zoshintsho eziya kuHumalog Ngesikhathi sokukhethwa komthamo, izilinganiso ezivame kakhulu ze-glycemia, ukubonisana njalo kwezokwelapha kuyadingeka. Njengomthetho, umuntu onesifo sikashukela udinga amayunithi ambalwa we-Humalog nge-1 XE kunomuntu. Isidingo esandayo se-hormone sibonwa phakathi kwezifo ezahlukahlukene, ukweqiwa kwemizwa ngokweqile, nokusebenza komzimba okusebenzayo.
Ukweqisa Ukwedlula umthamo kuholela ku-hypoglycemia. Ukuyiqeda, udinga ukwamukelwa. Amacala amakhulu adinga ukunakekelwa okuphuthumayo kwezokwelapha.
Ukubambisana neminye imithi I-Humalog inganciphisa umsebenzi:
izidakamizwa zokwelashwa kwegazi elinomfutho nomphumela we-diuretic,
amalungiselelo e-hormone, kufaka phakathi izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo,
I-nicotinic acid esetshenziselwa ukwelapha izinkinga zesifo sikashukela.
ama-hypoglycemic agents asetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2,
Uma le mishanguzo ingenakuthathelwa indawo abanye, isilinganiso seHumalog kufanele silungiswe okwesikhashana.
Isitoreji Esiqandisini - iminyaka emi-3, emazingeni okushisa asekamelweni - amasonto ama-4.
Phakathi kwemiphumela emibi, i-hypoglycemia kanye nemikhuba yokungezwani komzimba ngokuvamile ibhekwa kakhulu (1-10% yabanesifo sikashukela). Ngaphansi kwe-1% yeziguli zakha i-lipodystrophy endaweni yomjovo. Imvamisa yokunye ukusabela okungalungile ingaphansi kwe-0,1%.
Into ebaluleke kakhulu ngeHumalog
Ekhaya, iHumalog iphathwe ngaphandle kokuzenzisa usebenzisa ipeni lesirinji noma. Uma i-hyperglycemia eqediwe kufanele iqedwe, ukuphathwa komoya okuphathelene nomuthi kungenzeka futhi esikhungweni sezokwelapha. Kulokhu, ukulawula ushukela okuvamile kuyadingeka ukugwema ukweqisa.
Into esebenzayo yesidakamizwa yi-insulin lispro. Ihlukile kumahomoni omuntu ekuhlelweni kwama-amino acid kule molekyuli. Ukuguqulwa okunjalo akuvimbeli ama-receptors esitokisini ukubona i-hormone, ngakho-ke adlulisela ushukela ngokwawo. I-humalogue iqukethe ama-monulin ama-insulin kuphela - ama-molecule awodwa, angaxhunyiwe. Ngenxa yalokhu, igxwa ngokushesha futhi ngokulinganayo, iqala ukunciphisa ushukela ngokushesha kunokuba i-insulin evamile engakhelwanga.
I-Humalog yisidakamizwa esisebenza esifushane kunokuba, ngokwesibonelo, noma. Ngokusho kwesigaba, kubhekiselwa kuma-insulin analog ngesenzo se-ultrashort. Ukuqala komsebenzi wayo kushesha, cishe imizuzu eyi-15, ngakho-ke abantu abanesifo sikashukela akufanele balinde kuze kube yilapho umuthi usebenza, kodwa ungalungiselela isidlo ngokushesha ngemuva komjovo. Ngenxa yegebe elifushane elinjalo, kuba lula ukuhlela ukudla, futhi nengozi yokukhohlwa ukudla ngemuva komjovo wehliswe kakhulu.
Ukulawula okuhle kwe-glycemic, ama-ejenti asheshayo kufanele ahlanganiswe nokusetshenziswa okuphoqelelayo. Okuwukuphela kokuwukusetshenziswa kwephampu ye-insulin njalo.
Imithamo kaHumalog incike ezicini eziningi futhi inqunywa ngokuhlukile kwisifo sikashukela ngasinye. Kusetshenziswa izikimu ezijwayelekile akunconyiwe, njengoba kubhebhethekisa isinxephezelo sikashukela. Uma isiguli sinamathela ekudleni okuphansi kwe-carb, umthamo weHumalog ungaphansi kwezindlela ezijwayelekile zokuphatha ezinganikeza. Kulokhu, kunconywa ukusebenzisa i-insulin esheshayo esibuthakathaka.
I-Ultrashort hormone inika umphumela onamandla kunayo yonke. Lapho ushintshela kuHumalog, umthamo wayo wokuqala ubalwa njengo-40% we-insulin emfushane ngaphambili.Ngokwemiphumela ye-glycemia, umthamo uguqulwa. Isidingo esimaphakathi sokulungiswa kwengxenye ngayinye yesinkwa amayunithi ayi-1-1,5.
Kuthunyelwe i-humalogue ngaphambi kokudla ngakunye, okungenani kathathu ngosuku . Endabeni kashukela omningi, ukuvela kokulungiswa phakathi kwemijovo eyinhloko kuvunyelwe. Umyalo wokusetshenziswa uncoma ukubala inani elidingekayo le-insulin elithathwe kumakhamzimba ahlelelwe isidlo esilandelayo. Cishe imizuzu eyi-15 kufanele idlule kusuka ekujuleni kuya ekudleni.
Ngokusho kokubuyekezwa, lesi sikhathi ngokuvamile sincane, ikakhulukazi ntambama, lapho ukumelana ne-insulin kuphansi. Izinga lokumunca lingamuntu ngamunye, lingabalwa kusetshenziswa izilinganiso eziphindaphindwe kakhudlwana zeglue ngokushesha nje komjovo. Uma umphumela wokwehlisa ushukela ubonwa ngokushesha kunokuyalelwa yimiyalo, isikhathi ngaphambi kokudla kufanele sincishiswe.
I-Humalog ingenye yezidakamizwa ezisheshayo, ngakho-ke, kulula ukuyisebenzisa njengensiza ephuthumayo yesifo sikashukela uma isiguli sisengozini.
Isikhathi sokwenza (esifushane noma eside)
Inani eliphakeme le-insulin ye-ultrashort libonwa ngemizuzu engama-60 ngemuva kokuphathwa kwayo. Isikhathi sokusebenza sincike kumthamo; kukhulu ukuthi ungakanani, isikhathi eside umphumela wokwehlisa ushukela, ngokwesilinganiso - cishe amahora angama-4.
Ukuze uhlaziye kahle umphumela weHumalog, ushukela kufanele ulinganiswe ngemuva kwalesi sikhathi, imvamisa lokhu kwenziwa ngaphambi kokudla okulandelayo. Izilinganiso zangaphambili ziyadingeka uma i-hypoglycemia isolwa.
Sengineminyaka eminingi ngifunda inkinga yesifo sikashukela. Kuyesabeka lapho abantu abaningi befa, futhi nangaphezulu bakhubazeka ngenxa yesifo sikashukela.
Ezinye izindaba ezimnandi: UMnyango Wezempilo wenze ukutholwa okuhambisana nezindleko eziphakeme zomuthi. E-Russia, abanesifo sikashukela kuze kube Mashi 2 ngingayithola - Ama-ruble ayi-147 kuphela!
Isikhathi esifushane seHumalog akuyona into engathandeki, kepha inzuzo yesidakamizwa. Ngenxa yakhe, iziguli ezinesifo sikashukela mellitus mancane amathuba okuba zithole i-hypoglycemia, ikakhulukazi ebusuku.
Ngaphezu kweHumalog, inkampani yezokwelapha uLilly France ikhiqiza iHumalog Mix. Ingxube ye-lyspro insulin ne-protamine sulfate. Ngenxa yalokhu kuhlanganiswa, isikhathi sokuqala kwe-hormone sihlala sishesha, futhi isikhathi sokusebenza sanda kakhulu.
I-Humalog Mix iyatholakala ekugxiliseni okungu-2:
Inzuzo kuphela yezidakamizwa ezinjalo uhlobo olulula lomjovo. Isinxephezelo sikashukela i-mellitus ngokusetshenziswa kwabo sibi kakhulu kunhlobo lwe-insulin yokwelashwa kwe-insulin nokusetshenziswa kweHumalog ejwayelekile, izingane Humalog Mix azisetshenziswanga .
Le insulin ibekiwe:
Abantu abanesifo sikashukela abakwazi ukubala ngokuzimela le dosi noma benze umjovo, ngokwesibonelo, ngenxa yokungaboni kahle, ukukhubazeka noma ukwethuka.
Iziguli ezigula ngengqondo.
Iziguli esezikhulile ezinezinkinga eziningi zesifo sikashukela kanye nokwelashwa okungekuhle uma zingazimisele ukufunda.
Abantu abanesifo sikashukela abanesifo sohlobo 2, uma kukhiqizwa ama-hormone abo.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngeHumalog Mix kudinga ukudla okufana ngokuphelele, ukudla okulula okubandayo phakathi kokudla. Kuvunyelwe ukudla kuze kufike ku-3 XE isidlo sasekuseni, kuze kufike ku-4 XE ngesidlo sasemini nakusihlwa, cishe nge-2 XE ngesidlo sakusihlwa, kanye ne-4 XE ngaphambi kokulala.
I-Lyspro insulin njengento esebenzayo itholakala kuphela ku-Humalog yangempela. Izidakamizwa eziseduze nezenzo yilezi (kususelwa ku-aspart) kanye (glulisin). Lawa mathuluzi abuye futhi amafushane kakhulu, ngakho-ke akunandaba ukuthi ukhetha ini. Zonke zibekezelelwa kahle futhi zinikeza ukuncipha okusheshayo koshukela.Njengomthetho, preference inikezwa umuthi, ongatholakala mahhala emtholampilo.
Ukushintshwa kusuka ku-Humalog kuya ku-analogue yayo kungadingekile uma kwenzeka kusenokungahambi kahle. Uma umuntu onesifo sikashukela enamathela ekudleni okuphansi kwe-carb, noma evame ukuba ne-hypoglycemia, kunengqondo ukusebenzisa umuntu esikhundleni se-insulin ye-ultrashort.
Qiniseka ukuthi ufunda! Ngabe ucabanga ukuthi ukuphatha impilo yonke amaphilisi ne-insulin ukuphela kwendlela yokugcina ushukela ulawulwa? Hhayi iqiniso! Ungakuqinisekisa lokhu ngokwakho ngokuqala ukuyisebenzisa.
I-DNA ephinda i-anulinue yomuntu i-insulin.
Into esebenzayo yesidakamizwa: insulin lyspro
Ukubhalwa kwe-ATX: A10AB04
I-KFG: I-insulin elawula umuntu esifushane
Inombolo yokubhalisa: P. 015490/01
Usuku lokubhaliswa: 02.02.04
Umnikazi reg. acc: LILLY FRANCE S.A.S.
insulin lispro *
Ababekhona: i-glycerol, i-zinc oxide, i-sodium hydrogen phosphate, i-m-cresol, d / i amanzi, isixazululo se-hydrochloric acid 10% kanye nesisombululo se-sodium hydroxide 10% (ukudala izinga le-pH elidingekayo).
I-3 ml - ama-cartridge (5) - ama-blisters (1) - amaphakethe ekhadibhodi.
* Igama lomhlaba wonke elingahambisani nelinconyelwe yi-WHO, e-Russian Federation, isipelingi segama lomhlaba jikelele - i-insulin lispro yemukelwa.
Ukuchazwa kwesidakamizwa kusekwe emiyalweni evunyelwe ngokusemthethweni yokusetshenziswa.
Isenzo se-Pharmacological Humalog
I-DNA ephinda i-anulinue yomuntu i-insulin. Kuhluka kokugcina ngokulandelana okuphindayo kwama-amino acid asezikhundleni 28 no-29 kwensimbi ye-insulin B.
Umphumela oyinhloko wesidakamizwa ukulawulwa kwe-glucose metabolism. Ngaphezu kwalokho, inomphumela we-anabolic. Ezicubu zemisipha, kukhona ukwanda kokuqukethwe kwe-glycogen, okunamafutha acid, i-glycerol, ukwanda kokuhlanganiswa kwamaprotheni kanye nokwanda kokusetshenziswa kwe-amino acid, kepha ngasikhathi sinye kwehla kwe-glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogeneis, lipolysis, proteinabolism kanye nokukhishwa kwama-amino acid.
Ezigulini ezinodidi 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela, lapho zisebenzisa i-insulin lyspro, i-hyperglycemia eyenzeka ngemuva kokudla incishiswe kakhulu uma kuqhathaniswa ne-insulin yomuntu enganyibiliki. Ezigulini ezithola ama-insulin amafushane kanye ne-basal, kubalulekile ukukhetha umthamo wawo womabili ama-insulin ukuze uzuze amazinga eglucose aphelele usuku lonke.
Njengawo wonke amalungiselelo e-insulin, isikhathi sezenzo ze-lyspro insulin zingahluka ezigulini ezihlukene noma ngezikhathi ezihlukile esigulini esifanayo futhi kuya ngethamo, indawo yomjovo, ukunikezwa kwegazi, izinga lokushisa lomzimba nokusebenza komzimba.
Izici ze-pharmacodynamic ze-lyspro insulin ezinganeni nasebusheni ziyafana nalezo ezibonakala kubantu abadala.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ezithola imithamo ephezulu yokuphuma kwe-sulfonylurea, ukungezwa kwe-lyspro insulin kuholela ekunciphiseni okukhulu kwe-glycosylated hemoglobin.
Ukwelashwa kwe-Lyspro insulin ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 kuhambisana nokuncipha kwenombolo yeziqephu ze-nocturnal hypoglycemia.
Impendulo ye-glucodynamic ku-isulin lispro ayixhomekile ekuhlulekeni kokusebenza kwezinso noma isibindi.
I-Lyspro insulin iboniswe ilingana ne-insulin yomuntu, kepha isenzo saso senzeka ngokushesha okukhulu futhi sihlala isikhathi esifushane.
I-Lyspro insulin iboniswa ukuqala kwezenzo okusheshayo (cishe imizuzu eyi-15), njengoba Inesilinganiso sokumuncwa kakhulu, futhi lokhu kukuvumela ukukufaka masinyane ngaphambi kokudla (imizuzu eyi-0-15 ngaphambi kokudla), ngokungafani nokujwayelekile kwe-insulin (imizuzu engama-30-45 ngaphambi kokudla). ILyspro insulin inesikhathi esifushane sokusebenza (amahora ama-2 kuye kwayi-5) uma kuqhathaniswa ne-insulin evamile yabantu.
Ngemuva kokuphathwa kwe-sc, i-insulin Lyspro idonswa ngokushesha futhi ifinyelele ku-Cmax ku-plasma yegazi ngemuva kwemizuzu engama-30-70. I-Vd ye-insulin lyspro ne-insulin ejwayelekile yomuntu iyafana futhi isebangeni le-0.26-0.36 l / kg.
Ngokuphathwa kwe-sc1 kwe-T1 / 2 ye-insulin, i-lyspro icishe ibe yihora 1. Iziguli ezinesifo sezinso nezingenasici se-hepatic zigcina izinga eliphakeme lokutholwa kwe-insulin ye-lyspro kuqhathaniswa ne-insulin evamile yabantu.
Imithamo kanye nendlela yokuphatha umuthi.
Udokotela unquma umthamo ngamunye, kuye ngezidingo zesiguli. I-Humalog ingabhalwa ngaphambi kokudla, uma kunesidingo - ngokushesha ngemuva kokudla.
Izinga lokushisa lomuthi olungiselelwe kufanele libe lokushisa lasekamelweni.
I-Humalog ihanjiswa nge-sc ngendlela yemijovo noma ngendlela yokufakwa kwe-sc okwengeziwe kusetshenziswa iphampu ye-insulin. Uma kunesidingo (i-ketoacidosis, ukugula kakhulu, isikhathi esiphakathi kokusebenza noma isikhathi sokusebenza) I-Humalog ingafakwa ngaphakathi / ngaphakathi.
I-SC kufanele inikezwe ehlombe, ethangeni, entanjeni, noma esiswini. Izindawo zokujova kufanele zishintshwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe isikhathi esingaphezu kwesingu-1 ngenyanga. Lapho s / ukwethulwa kwesidakamizwa i-Humalog, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuvikela ukungena nomuthi emgodini wegazi. Ngemuva komjovo, indawo yomjovo akufanele ihlanjululwe. Isiguli kufanele siqeqeshelwe inqubo efanelekile yokulimala.
Imithetho yokuphatha i-Humalog yezidakamizwa
Isixazululo somuthi uHumalog kufanele sibe sobala futhi singenamibala. Isixazululo esinamafu, esinyene noma esinemibala emincane yomuthi, noma uma izinhlayiya eziqinile zitholwe kuwo, akumele zisetshenziswe.
Lapho ufaka i-cartridge kwipeni yesirinji (ipeni-injector), unamathisela inaliti futhi wenza umjovo we-insulin, kuyadingeka ukulandela imiyalo yomenzi ehlanganiswe nepeni ngalinye lesirinji.
2. Khetha isiza somjovo.
3. I-antiseptic yokwelapha isikhumba endaweni yomjovo.
4. Susa isicaphuna ngenaliti.
5. Lungisa isikhumba ngokuselula noma ngokuvikela isibaya esikhulu. Faka inalithi ngokuya ngemiyalo yokusebenzisa ipeni yesirinji.
6. Cindezela inkinobho.
7. Susa inaliti bese unyenya ngobunono indawo yomjovo imizuzwana eminingana. Musa ukuyihlikihla indawo yomjovo.
8. Usebenzisa inalithi yenaliti, khipha inaliti oyonakalisile.
9. Iziza zomjovo kufanele zishintshwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe kungabi ngaphezu kwesikhathi esisodwa ngenyanga.
Imijovo ye-Intravenous yeHumalog kufanele yenziwe ngokuhambisana nomkhuba ojwayelekile wokulashwa komjovo we-intravenous, ngokwesibonelo, ukuphathwa kwe-intravenous bolus noma ukusebenzisa uhlelo lokufaka. Kulokhu, kwesinye isikhathi kuyadingeka ukulawula izinga le-glucose egazini.
Izinhlelo zokufakwa nokugxila kusuka ku-0,1 IU / ml kuya ku-1.0 IU / ml we-insulin lispro kusixazululo se-0.9% sodium chloride noma isisombululo esingu-5% dextrose sizinzile ekushiseni kwegumbi amahora angama-48.
Ukufakwa kwe-insulin kwe-P / C usebenzisa iphampu ye-insulin
Ngokufakwa kwesidakamizwa i-Humalog, amaphampu Amancanyana kanye ne-Disetronic angasetshenziselwa ukumisela i-insulin. Kufanele ulandele ngokuqinile imiyalo eza nephampu. Uhlelo lokungena luguqulwa njalo ngemuva kwamahora angama-48. Uma kuxhuma uhlelo lokumnika, kugcinwa imithetho ye-aseptic. Uma kwenzeka isiqephu se-hypoglycemic, ukumnika kuyamiswa kuze kube yilapho isiqephu sixazulula. Uma kunamazinga aphindwe kabili noma aphansi kakhulu eglucose egazini, khona-ke kufanele wazise udokotela wakho ngalokhu futhi ucabangele ukunciphisa noma ukumisa ukumiliselwa kwe-insulin. Ukungasebenzi kahle kwepompo noma uhlelo lokufaka oluvikelwe kungaholela ekukhuphukeni ngokushesha kwamazinga kashukela. Uma kwenzeka usola ukwephulwa kokuhlinzekwa kwe-insulin, kufanele ulandele imiyalo futhi, uma kunesidingo, wazise udokotela. Uma usebenzisa impompo, isidakamizwa seHumalog akufanele sihlanganiswe namanye ama-insulin.
Umphumela we-Humalog effect:
Umphumela wecala ohambisana nomphumela oyinhloko wesidakamizwa: hypoglycemia. I-hypoglycemia enkulu ingaholela ekulahlekelweni kokungazi (i-hypoglycemic coma) futhi, ezimeni ezihlukile, ekufeni.
Ukuphendula kwe-allergic: ukusabela komzimba okwenzeka endaweni kungenzeka - ukubomvu, ukuvuvukala noma ukulunywa endaweni yomjovo (kuvame ukunyamalala phakathi kwezinsuku noma amasonto ambalwa) ukuphefumula, ukuncipha kwegazi, i-tachycardia, ukukhuphuka kokujuluka. Amacala amakhulu okuphendula komzimba okuhlelekile angaba sengozini empilweni.
Okunye: lipodystrophy endaweni yokujova.
Sebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa nokukhishwa komzimba.
Kuze kube manje, ayikho imiphumela engathandeki yeLyspro insulin ekukhulelweni noma empilweni ye-fetus / entsha. Azikho izifundo ezifanele ezenziwa mayelana nobhubhane ezenziweyo.
Umgomo wokwelashwa kwe-insulin ngesikhathi sokukhulelwa ukugcina ukulawula okwanele kwamazinga kashukela ezigulini ezinesifo sikashukela esincike ku-insulin noma onesifo sikashukela sokukhulelwa. Isidingo se-insulin sivame ukwehla ku-trimester yokuqala futhi sande kuma-trimesters wesibili nowesithathu wokukhulelwa. Ngesikhathi nangemva nje kokuzalwa, izidingo ze-insulin zingase zehle kakhulu.
Abesifazane beminyaka yokuzala izingane ezinesifo sikashukela kufanele bazise udokotela ngokuqala noma ukukhulelwa okuhleliwe. Ngesikhathi sokukhulelwa, iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukuqashwa ngokucophelela kwamazinga kashukela egazini, kanye nokuqapha okujwayelekile komtholampilo.
Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus ngesikhathi sokuncelisa, kungenzeka kulungiswe ukulungiswa komthamo we-insulin kanye / noma ukudla.
Imiyalo ekhethekile yokusebenzisa i-Humalog.
Ukudluliselwa kwesiguli kolunye uhlobo noma uhlobo lwe-insulin kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha. Izinguquko emsebenzini, uhlobo lomkhiqizi), uhlobo (isb., Okuvamile, i-NPH, i-Tape), izinhlobo (isilwane, umuntu, i-analogue yomuntu insulin) kanye / noma indlela yokukhiqiza (i-DNA recombinant insulin noma i-insulin yemvelaphi yesilwane) ingadinga Izinguquko zedosi.
Izimo lapho izimpawu zokwexwayisa zakuqala ze-hypoglycemia zingase zingacaciswa futhi zingabaluleki kangako kufaka phakathi ukuqhubeka kwesifo sikashukela, ukwelashwa okukhulu kwe-insulin, izifo zesistimu yezinzwa kwisifo sikashukela, noma emithini, njenge-beta-blocker.
Ezigulini ezinokusabela kwe-hypoglycemic ngemuva kokushintsha kusuka ku-insulin ethathwe ezilwaneni kuya kwi-insulin yomuntu, izimpawu zokuqala ze-hypoglycemia zingasho ukuthi zinciphisiwe noma zihluke kulabo abanolwazi nge-insulin yabo yangaphambilini. Ukuphendula okungalungisiwe kwe-hypoglycemic noma i-hyperglycemic kungadala ukulahlekelwa ukwazi, ukukhohlisa, noma ukufa.
Imithamo enganele noma ukuyeka ukwelashwa, ikakhulukazi ngesifo sikashukela esincike ku-insulin, kungaholela ku-hyperglycemia ne-ketoacidosis yesifo sikashukela, izimo ezingaba yingozi kakhulu esigulini.
Isidingo se-insulin singase sinciphe ezigulini ezihluleke ngokwe-renal, kanye nasezigulini ezihluleka kwesibindi ngenxa yokwehla kwe-gluconeogeneis kanye ne-insulin metabolism. Kodwa-ke, ezigulini ezinokwehluleka kwesibindi okungapheli, ukumelana okwandisiwe kwe-insulin kungaholela ekwandeni kwesidingo se-insulin.
Isidingo se-insulin singakhula nezifo ezithathelwanayo, ingcindezi engokomzwelo, kanye nokwenyuka kwenani lama-carbohydrate ekudleni.
Ukulungiswa komthamo kungadingeka futhi uma umsebenzi womzimba wesiguli ukhuphuka noma ukuguquka kokudla okujwayelekile. Ukuzivocavoca ngokushesha ngemuva kokudla kwandisa ingozi ye-hypoglycemia.Umphumela we-chemacodynamics of okusheshayo osebenza njenge-insulin analogue ukuthi uma i-hypoglycemia ikhula, ingakhula ngemuva kokulimala ngaphambi kwalokho lapho kufakwa i-insulin yomuntu enganyibiliki.
Isiguli kufanele sixwayiswe ukuthi uma udokotela enquma ukuthi kulungiselelwe i-insulin nge-40 IU / ml nge-vial, khona-ke i-insulin akufanele ithathwe ku-cartridge ene-insulin concentration ye-100 IU / ml ngesirinji yokujova i-insulin enama-40 IU / ml.
Uma kunesidingo sokuthatha ezinye izidakamizwa ngasikhathi sinye seHumalog, isiguli kufanele sibonane nodokotela.
Nge-hypoglycemia noma i-hyperglycemia ehlotshaniswa nohlobo lwe-dosing olunganele, ukwephula amandla okugxila kanye nejubane lokuphendula kwe-psychomotor kungenzeka. Lokhu kungaba yingozi yemisebenzi engaba yingozi (kufaka phakathi izimoto zokushayela noma ukusebenza ngemishini).
Iziguli kufanele ziqaphele ukugwema i-hypolycemia ngenkathi ushayela. Lokhu kubaluleke kakhulu ezigulini ezinomuzwa oncishisiwe noma ongekho wezimpawu zezimbangela ze-hypoglycemia, noma iziqephu ze-hypoglycemia zivame kakhulu kuzo. Kulezi zimo, kuyadingeka ukuhlola ukuthi kungenzeka yini ukushayela. Iziguli ezinesifo sikashukela zingasiza ngokwazo zibambe i-hypoglycemia emnene ngokuthatha ushukela noma ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate (kunconywa ukuthi uhlale unama-glucose okungenani angama-20). Isiguli kufanele sazise udokotela oholayo nge-hypoglycemia edlulisiwe.
Ukusebenzisana kweHumalog nezinye izidakamizwa.
Umphumela we-hypoglycemic kaHumalog uncishiswa izindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, ama-corticosteroids, amalungiselelo we-thyroid, danazol, beta2-adrenergic agonists (kufaka phakathi i-rhytodrin, i-salbutamol, i-terbutaline), i-tricyclic antidepressants, i-thiazide diuretics, i-chlorprotixenic acid, iacinid diacin. okususelwa ku-phenothiazine.
Umphumela we-hypoglycemic weHumalog uvuselelwa yizidakamizwa eziqukethe i-beta-blockers, i-ethanol nezidakamizwa eziqukethe i-ethanol, ama-anabolic steroid, i-fenfluramine, i-guanethidine, i-tetracyclines, izidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo, ama-salicylates (ngokwesibonelo, ama-acetylsalicylic acid, aniloprilactyl antagonists, Ml inhibitors, Ml inhibitors, inhibitors inhibitors ama-angiotensin II receptors.
I-Humalog akufanele ihlanganiswe namalungiselelo e-insulin yezilwane.
I-Humalog ingasetjenziswa (ngaphasi kokubukelwa ngudorhodere) ngokuhlanganiswa ne-insulin yomuntu esebenza isikhathi eside noma ngokuhlanganiswa nama-ejenti omlomo we-hypoglycemic, i-sulfonylurea derivatives.
Imibandela yokugcinwa kwesimo Somshini Wezidakamizwa.
Uhlu B. Umuthi kufanele ugcinwe ungafinyeleleki ezinganeni, esiqandisini, emazingeni okushisa ayi-2 ° kuya ku-8 ° C, ungashisi. Impilo yamashalofu yiminyaka emi-2.
Umuthi osetshenziswayo kufanele ugcinwe ekushiseni kwegumbi kusuka ku-15 ° kuya ku-25 ° C, uvikeleke elangeni eliqondile nasekushiseni. Impilo yeshelf - kungadluli izinsuku ezingama-28.
Kulesi sihloko, ungafunda imiyalo yokusebenzisa umuthi Isi-Humalogue . Inikeza impendulo evela kuzivakashi eziya kusayithi - abathengi balo muthi, kanye nemibono yongoti bezokwelapha ngokusetshenziswa kweHumalog ekusebenzeni kwabo. Isicelo esikhulu ukufaka ngenkuthalo izibuyekezo zakho mayelana nomuthi: umuthi osizile noma ongakusizanga ukuqeda lesi sifo, yiziphi izingqinamba nemiphumela emibi eye yabonwa, okungenzeka ukuthi ayizange imenyezelwe ngumenzi kwisichasiselo. Ama-analoggs we-Humalog lapho kukhona izifinyezo zezakhiwo ezitholakalayo. Sebenzisa ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela (sincike ku-insulin futhi sincike ku-insulin) kubantu abadala, ezinganeni kanye nangesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa. Ukwakheka kwalo muthi.
Isi-Humalogue - i-analogue ye-insulin yabantu, ihlukile kuyo ngokulandelana okuphindaphindiwe kwe-proline kanye ne-lysine amino acid izinsalela ezikhundleni 28 no-29 zenani le-insulin B. Uma kuqhathaniswa namalungiselelo we-insulin asebenza ngokufushane, i-lyspro insulin iboniswa ukuqala okungashesha nokuphela komphumela, okubangelwa ukumukelwa okwandayo okuvela kwidepho engaphansi komhlaba ngenxa yokulondolozwa kwesakhiwo se-monomeric sama-molecule e-insulin e-lyspro kusisombululo. Ukuqala kokusebenza kuyimizuzu eyi-15 ngemuva kokuphathwa kobuhlakani, umphumela omkhulu uphakathi kwamahora ayi-0,5 namahora ayi-2,5, isikhathi sokusebenza amahora angama-3-4.
I-Humalog Mix yi-analogue ephindaphindayo ye-insulin yabantu futhi ingxube eyenziwe ngomumo eyenziwe ene-lyspro insulin (i-analog esheshayo esebenza ye-insulin yomuntu kanye nokumiswa kwe-lyspro protamine insulin (i-analogue ephakathi nesikhathi se-insulin analogue).
Isenzo esiyinhloko se-insulin lyspro ngumthetho we-glucose metabolism. Ngaphezu kwalokho, inemiphumela ye-anabolic ne-anti-catabolic kuma-tishu ahlukahlukene omzimba. Ezicubu zemisipha, kukhona ukwanda kokuqukethwe kwe-glycogen, okunamafutha acid, i-glycerol, ukwanda kokuhlanganiswa kwamaprotheni kanye nokwanda kokusetshenziswa kwe-amino acid, kepha ngasikhathi sinye kwehla kwe-glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogeneis, lipolysis, proteinabolism kanye nokukhishwa kwama-amino acid.
I-Lyspro insulin + oyithola.
Ukuphelela kokumuncwa kanye nokuqala komphumela we-insulin kuya endaweni yokulimala (isisu, ithanga, amabhuzu), umthamo (umthamo we-insulin efakiwe), kanye nokuxineka kwe-insulin lapho kulungiselelwa. Kusatshalaliswa ngokungalingani ezicutshini. Akunqamuki isithiyo se-placental futhi singene obisini lwebele. Ubhujiswa yi-insulinase ikakhulukazi esibindini nasezinso. Igcotshwa yizinso - 30-80%.
thayipha i-1 isifo sikashukela mellitus (sincike kwe-insulin), kufaka phakathi ngokungabekezeleli amanye amalungiselelo e-insulin, ene-postprandial hyperglycemia engalungiswa ngamanye amalungiselelo e-insulin, ukumelana okungatheni kwe-insulin (ukushesha kokuwohloka kwe-insulin),
Uhlobo 2 isifo sikashukela i-mellitus (esingeyona i-insulin-exhomekeke): ukumelana nama-ejenti we-hypoglycemic womlomo, kanye nokufakwa okungafanele kokunye kokulungiswa kwe-insulin, i-hyperglycemia engaqondile, ngesikhathi sokuhlinzwa, izifo ezithinta umzimba.
Isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous and subcutaneous kwe-100 IU kwikheji le-3 ml elihlanganiswe kwipeni noma ipeni isirinji.
Ukumiswa kokuphathwa kokufakelwa kwe-100 IU ku-cartridge eyi-3 ml ehlanganiswe kwipeni noma isirinji yepeni le-QuickPen (Humalog Mix 25 no-50).
Amanye amafomu wesilinganiso, kungaba ngamathebulethi noma amaphilisi, awatholakali.
Imiyalo yokusebenzisa nendlela yokusebenzisa
Umthamo usethelwe ngawodwana. I-Lyspro insulin ilawulwa ngokungaziphathi kahle, ngemithambo yegazi noma ngemizuzu engu-5-16 ngaphambi kokudla. Umthamo owodwa amayunithi angama-40, okweqile kuvunyelwe kuphela ezimweni ezihlukile. Nge-monotherapy, i-Lyspro insulin iphathwe izikhathi ezingama-4-6 ngosuku, kuhlanganiswa namalungiselelo we-insulin isikhathi eside - amahlandla ama-3 ngosuku.
Umuthi kufanele uphathwe ngokungaziphathi.
Ukuphathwa okuphathelene nomuthi i-Humalog Mix okwenziwe ngemithi kuhlangene.
Ngokuphambuka kufanele kufakwe ehlombe, ethangeni, entanjeni noma esiswini. Izindawo zokujova kufanele zishintshwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe isikhathi esingaphezu kwesingu-1 ngenyanga. Lapho s / ukwethulwa kwesidakamizwa i-Humalog, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuvikela ukungena nomuthi emgodini wegazi. Ngemuva komjovo, indawo yomjovo akufanele ihlanjululwe.
Lapho ufaka i-cartridge emshinini wokujova we-insulin futhi unamathisela inalithi ngaphambi kokuphathwa kwe-insulin, imiyalo yomenzi wensimbi yokufaka umjovo we-insulin kumele ibhekwe ngokuqinile.
Imithetho yokwethulwa kwe-Humalog Mix Yomuthi
Ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa, i-cartridge yeHumalog Mix ingxubevange kufanele igingqwe phakathi kwezandla amahlandla ayishumi bese inyakaziswa, iphenduke i-180 ° futhi izikhathi eziyishumi ukuze iphinde isuse i-insulin ize ibukeke njengamanzi noma ubisi olunamafu oluningi. Nyakazisa ngamandla, njengoba lokhu kungaholela kugwebu, okungaphazamisa umthamo ofanele. Ukwenza lula ukuhlanganiswa, i-cartridge iqukethe ubuhlalu obuncane bengilazi. Umuthi akufanele usetshenziswe uma uqukethe ama-flakes ngemuva kokuxubana.
Ungasiphatha kanjani lesi sidakamizwa
Khetha indawo yomjovo.
Phatha isikhumba nge-antiseptic endaweni yomjovo (ngokuzithiba, ngokuya ngezincomo zikadokotela).
Susa isivalo esingaphandle esivikela ngenaliti.
Lungisa isikhumba ngokusidonsa noma ekutholeni isibaya esikhulu.
Faka inaliti ngenkani bese wenza umjovo ngokuya ngemiyalo yokusebenzisa ipeni yesirinji.
Susa inaliti bese unyenya ngobunono indawo yomjovo imizuzwana embalwa. Musa ukuyihlikihla indawo yomjovo.
Usebenzisa isivalo esingaphandle sokuvikela inaliti, khipha inaliti bese uyonakalisa.
Faka ikepeni esibayeni sesirinji.
I-hypoglycemia (i-hypoglycemia enamandla ingaholela ekulahlekelweni kokungazi futhi, ezimeni ezihlukile, ekufeni),
ubomvu, ukuvuvukala, noma ukulunywa endaweni yomjovo (kuvame ukunyamalala phakathi kwezinsuku noma amasonto ambalwa, kwezinye izimo lokhu kusabela kungabangelwa izizathu ezingahambelani ne-insulin, ngokwesibonelo, ukucasuka kwesikhumba ngumjovo we-antiseptic noma ongafanele),
ukwehla kwengcindezi yegazi,
ukuthuthukiswa kwe-lipodystrophy endaweni yomjovo.
Kuze kube manje, ayikho imiphumela engathandeki yeLyspro insulin ekukhulelweni noma ngesimo se-fetus kanye nesanda kuzalwa.
Umgomo wokwelashwa kwe-insulin ngesikhathi sokukhulelwa ukugcina ukulawula okwanele kweglucose. Isidingo se-insulin sivame ukwehla ku-trimester yokuqala futhi sande kuma-trimesters wesibili nowesithathu wokukhulelwa. Ngesikhathi nangemva nje kokuzalwa, izidingo ze-insulin zingase zehle kakhulu.
Abesifazane beminyaka yokuzala izingane ezinesifo sikashukela kufanele bazise udokotela ngokuqala noma ukukhulelwa okuhleliwe.
Indlela yokuphatha ehloselwe ifomu lomthamo osetshenzisiwe we-lyspro insulin kufanele iqashelwe. Lapho udlulisela iziguli kusuka kumalungiselelo we-insulin enza ngokushesha imvelaphi yezilwane iye kwi-insulin lispro, ukulungiswa komthamo kungadingeka. Ukudluliselwa kweziguli ezithola i-insulin ngomthamo wansuku zonke odlula ama-PIERES ayi-100 kusuka kuhlobo oluthile lwe-insulin kuya kolunye kunconyelwe ukwenziwa esibhedlela.
Isidingo se-insulin singakhula ngesikhathi sesifo esithathelwanayo, kanye nokuxineka ngokomzwelo, kanye nokwenyuka kwesibalo sama-carbohydrate ekudleni, ngesikhathi sokudla okungeziwe kwezidakamizwa ezinomsebenzi we-hyperglycemic (amahomoni we-thyroid, ama-glucocorticoids, ama-contraceplication omlomo, i-thiazide diuretics).
Ukulungiswa kwe-hypoglycemia ngesimo esibuhlungu kungenziwa kusetshenziswa i / m kanye / noma s / c ukuphathwa kwe-glucagon noma iv ukuphathwa kwe-glucose.
Umphumela we-hypoglycemic we-Lyspro insulin uthuthukiswa yi-MAO inhibitors, ama-beta-blockers angakhethi, ama-sulfonamides, i-acarbose, i-ethanol (utshwala) nezidakamizwa eziqukethe i-ethanol.
Umphumela we-hypoglycemic we-Lyspro insulin uncishiswa ngama-glucocorticosteroids (GCS), ama-hormone e-thyroid, izithiyo zokuvimbela inzalo ngomlomo, ama-thiazide diuretics, ama-diazoxide, ama-antidepressants ama-tricyclic.
Ama-Beta-blockers, i-clonidine, i-reserpine angakwazi ukuvimba ukubonakaliswa kwezimpawu ze-hypoglycemia.
Ama-analoggs we-drug Humalog
Ukufana kwezakhi zento esebenzayo:
Humalog Mix 25,
Hlanganisa uHumalog 50.
Analogs eqenjini le-pharmacological (insulin):
I-Actrapid HM Penfill,
I-B-Insulin S.Ts. Berlin Chemie,
I-Berlinsulin H 30/70 U-40,
Berlinsulin H 30/70 ipeni,
I-Berlinsulin N Basal U-40,
Berlinsulin N Ipeni laseBasal,
I-Berlinsulin N Normal U-40,
I-Berlinsulin N Ipeni elijwayelekile,
Idepho insulin C,
INdebe Yomhlaba wonke ye-Isofan Insulin,
I-Insulin Tape SPP,
Ingulube ye-insulin ehlanjululwe kakhulu,
INdebe Yomhlaba esePhakathi,
IMikstard 30 NM Penfill,
I-Protafan HM Penfill,
Uma kungekho ukufana kwezidakamizwa kwento esebenzayo, ungachofoza izixhumanisi ezingezansi kwezifo ukuthi umuthi ofanele usiza kuzo futhi ubone izithasiselo ezikhona zomphumela wokwelapha.
I-Lyspro insulin isidakamizwa se-hypoglycemic esiseqenjini labaphethe insulin amafushane. Umuthi wayo osebenzayo yi-insulin lispro, i-analog recombinant ye-deoxyribonucleic acid (i-DNA) ye-insulin yomuntu, eyehlukile kuwo ngokuhlelwa kabusha kwama-amino acid ezikhundleni ezingama-28 no-29 emgqeni weB we-molecule we-insulin.
Ngaphezu kokulawula i-glucose metabolism, i-insulin lyspro inemiphumela ye-anabolic ne-anti-catabolic kuma-izicubu zomzimba. Ezicubu zemisipha, kunomthelela ekwandeni kokuqukethwe kwe-glycogen, glycerol namafutha acid, ukwanda kokusetshenziswa kwama-amino acid, kanye nokwanda kokuhlanganiswa kweprotheni. Ngasikhathi sinye, kunokuvinjelwa kwezinqubo ze-glycogenolysis, ketogenesis, gluconeogenesis, lipolysis, ukukhishwa kwama-amino acid, ne-protein catabolism.
I-Lyspro insulin ne-insulin yomuntu ilingana, kepha eyangaphambili ibonakala ngokuqala okusheshayo nesikhathi esifushane sokwenza. Ngenxa yezinga lokufakwa okuphezulu, umphumela we-hypoglycemic weLyspro insulin uvela 1/4 h ngemuva kokuphatha, okuvumela ukuthi umuthi usetshenziswe ngokushesha ngaphambi kokudla.
Isikhathi somuthi sisuka emahoreni amabili kuya kwayi-5. Singahlukahluka ezigulini ezahlukahlukene nasezigulini esisodwa ngezikhathi ezihlukile. Ushintsho esikhathini sokusebenza luthonywe umthamo, indawo yomjovo, izinga lokushisa lomzimba, ukuphakelwa kwegazi nokusebenza komzimba kwesiguli.
Uma kuqhathaniswa ne-insulin yomuntu esebenza kalula, ukusetshenziswa kwe-lyspro insulin kunganciphisa imvamisa yeziqephu ze-nocturnal hypoglycemia, kunciphisa kakhulu i-hyperglycemia eyenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lokuqala nohlobo 2 ngemuva kokudla.
Kubantu abadala, izingane kanye nentsha, kugcinwa i-pharmacodynamics efanayo ye-insulin lyspro.
Impendulo ye-glucodynamic ku-insulin lispro ayixhomeki esimweni somsebenzi wezinso noma wesibindi wesiguli.
Ukusetshenziswa kwe-Insulin Lyspro kuboniswa ekwelashweni kwalezi zinhlobo zikashukela ezilandelayo kubantu abadala nasezinganeni:
kuncike ku-insulin (uhlobo 1 lwesifo sikashukela): kufaka phakathi iziguli ezingabekezeleleki kwamanye amalungiselelo e-insulin, ngokuthuthukiswa kwezinye izidakamizwa ezingeke zilungiswe yi-postprandial insulin (ngemuva kokudla) kwe-hyperglycemia, i-acute subcutaneous insulin ukumelana (ukushesha kokulimala kwe-insulin),
ukungathembeli kwe-insulin-(uhlobo 2 sikashukela mellitus): uma kwenzeka kugonyelwa abagwebi bomlomo be-hypoglycemic, kanye nokutholwa kokulimala kokunye kokulungiswa kwe-insulin, ngesikhathi sokungenelela kokuhlinzwa, izifo ezithinta umzimba, izifo ezingaqondile ze-postprandial hyperglycemia.
I-Lyspro insulin, imiyalelo yokusetshenziswa: indlela nomthamo
Isixazululo se-Insulin Lyspro senzelwe ukuphathwa kwe-SC ne-iv. Imijovo ayenziwa ngaphambi kwemizuzu engu-15 ngaphambi kokudla noma ngokushesha ngemuva kokudla.
Ngaphansi kwesikhumba, umuthi ungalawulwa nge-bolus noma njengomjovo wesikhathi eside wokujikija usebenzisa iphampu ye-insulin.
Emthanjeni, ukuphathwa kwe-lyspro insulin kuboniswa i-ketoacidosis, izifo eziyingozi, phakathi kokuhlinzwa noma ngemuva kokuhlinzwa.
Izinga lokushisa lesisombululo esifakiwe kufanele lihambisane lokushisa kwekamelo.
Ngaphambi kokuphatha, okuqukethwe ikhareji noma i-vial kufanele kuhlolwe ngokubonakalayo ukuze kufaneleke. Uketshezi kufanele licace futhi lungabi nombala. Uma kuvela ukuthi kunamafu, kugqinsiwe, kunemibala emincane noma uma kutholakala izinhlayiya zakwamanye amazwe - ikhambi kufanele lilahlwe.
Udokotela unquma umthamo kanye nendlela yokuphathwa kwe-Insulin Lyspro ngawodwana, kuya ngokuhlushwa kweglucose egazini.
Ukuphathwa kokuzitholela ngepeni yesirinji
I-S / c I-Insulin Lyspro ingafakwa engxenyeni engaphansi yesisu, ehlombe, ethangeni noma emabhulokini, kugwenywe nekhambi lingena emgodini wegazi. Indawo yomjovo kufanele iguqulwe njalo, igweme ukusetshenziswa kwendawo efanayo kaningi kunesikhathi esiyi-1 ngenyanga. Ngemuva komjovo, indawo yomjovo akufanele ihlanjululwe.
Ama-Cartridges kumele asetshenziswe ne-EndoPen Syringe Pens eyenziwe ngeBagging Gangan Technology Co. Ltd. ”(China), njengoba ukunemba kwe-dosing kusethelwe kuphela amapeni we-syringe akhonjisiwe.
Lapho kunqunywa umuthi, udokotela kufanele afundise isiguli indlela yokuzibamba ngomjovo we-sc, futhi aqiniseke ukuthi isiguli sifakwe kahle nge-insulin namandla okusebenzisa ipeni lesirinji.
I-cartridge kufanele ifakwe esibayeni sesirinji futhi ifakwe ngokuqinile ngokwemiyalo yomenzi yokusebenzisa ipeni yesirinji.
Imiyalo-by-step-step ekuphatheni ngethamo le-Insulin lispro:
Geza izandla kahle.
Lungisa isikhumba endaweni yomjovo ngokuya ngezincomo zikadokotela.
Faka inaliti ngaphansi kwesikhumba, yenza umjovo ngokuya ngemiyalo yepeni yesirinji.
Susa inaliti, cindezela ngobumnene indawo yomjovo nge-swab yekotini imizuzwana embalwa, ungafafazi indawo yomjovo.
Khipha inaliti nge-cap yangaphandle yokuzivikela bese uyilahla.
Ukuphathwa kwe-subcutaneous ngepompo le-insulin
Iphampu le-insulin lingasetshenziswa ngohlelo lokuphathwa ngokuqhubekayo kwe-insulin enophawu lwe-CE. Ngaphambi kokwethulwa ngakunye, kuyadingeka ukuqinisekisa ukufaneleka kwephampu ethile futhi uqaphele ngokuqinile zonke izidingo zemiyalo yokusebenza kwayo. Kufanele kusetshenziswe indawo yokugcina kanye ne-catheter efanelekile; shintsha njalo ikhithi ukuze ilawulwe nge-insulin. Esiqeshini se-hypoglycemic, ukuphathwa kwezidakamizwa kufanele kuyekwe kuze kube yilapho isiqephu sixazulula. Uma uthola inani eliphansi kakhulu le-glucose egazini, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Kuyadingeka ukuthi ucabangele ukunciphisa umthamo noma ukumisa ukuphathwa kwe-lyspro insulin.
Ukuphazamiseka ekunikezelweni kwekhambi ngenxa yokuvalwa kohlelo lomjovo noma ukungasebenzi kahle kwephampu ye-insulin kungadala ukuthi isiguli sikhulise ngokushesha ukugxila kwe-glucose. Ngakho-ke, ngokusola okuncane kakhulu kokukhona kwanoma yikuphi ukwephulwa ohlelweni, kubalulekile ukulandela imiyalo futhi wazise udokotela uma kunesidingo.
Musa ukuhlanganisa i-Insulin Lyspro namanye ama-insulin lapho usebenzisa iphampu.
I-Intravenous insulin ingahanjiswa nge-bolus noma i-drip, ihambisane nokuqapha okujwayelekile kokugxila kweglucose yegazi.
Ukuze ufake i-insulin, i-insulin lyspro ingahlakazwa nge-5% dextrose solution noma u-0.9% sodium chloride solution.Lapho ukuqoqwa kwe-insulin kwekhambi lokungeniswa kusendaweni ye-0.1-1 IU nge-1 ml, ikhambi elilungiselelwe lihlala lizinzile amahora angama-48 endaweni yokushisa yokubekelwa egumbini.
Ithonya kwikhono lokushayela izimoto nezindlela eziyinkimbinkimbi
Ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-Insulin Lyspro lapho ushayela izimoto noma usebenza ngezinqubo eziyinkimbinkimbi, kuyadingeka ukubheka ukwephulwa okungenzeka kwejubane lokuphendula kwe-psychomotor kanye namandla okugxila ngesikhathi sokuthuthukiswa kwe-hypo- noma i-hyperglycemia ngenxa yerejimthi yemithamo enganele. Kuqashelwa ikakhulukazi iziguli ezineziqephu ezivame kakhulu ze-hypoglycemia, ngomqondo oncishisiwe wezimpawu ze-preursors ze-hypoglycemia noma ukungabikho kwazo. Kuyadingeka ukwenza ukuhlola komuntu ngamunye kokufaneleka kokushayela.
Ukubuyekezwa mayelana ne-Insulin Lyspro
Ezingosini ezikhethekile namuhla akukho kuzibuyekezo mayelana ne-Insulin Lyspro kusuka ezigulini nasemindenini yazo.
Ochwepheshe batusa ukusetshenziswa kwe-analogue ye-insulin ene-subcutaneous, esebenza ngokushesha - i-insulin lispro, esimweni sesifo esisongela impilo sikashukela esidalwa yisifo sikashukela esingalawulwa (sikashukela ketoacidosis), esikhundleni sokwelashwa okujwayelekile (ukuphathwa kwe-insulin ejwayelekile). Njengoba kule ndaba isebenza ngokushesha kune-insulin ejwayelekile yomuntu futhi igwema ukufakwa okuqhubekayo kwesisombululo, imvamisa idinga ukulaliswa esibhedlela kwesiguli esikhungweni sokunakekelwa esibanzi.
Intengo ye-insulin lispro emakhemisi
Intengo ye-Insulin Lyspro yephakheji equkethe i-1 cartridge enesisombululo ingaba kusuka kuma-ruble angama-252, ama-cartridge angu-5 kusuka kuma-ruble ayi-1262, ibhodlela eli-1 (10 ml) - kusuka kuma-ruble angama-841.
Ezemfundo: IYunivesithi yaseMoscow State Medical yokuqala eqanjwe ngo-I.M. I-Sechenov, ekhethekile "Imithi Jikelele".
Ngesikhathi sokuphila, umuntu ojwayelekile akakhiqizi amachibi amakhulu amabili amathe.
Kwakunjalo ukuthi ukuqhakaza kucebise umzimba ngomoya-mpilo. Kodwa-ke, lo mbono awuvunyelwa. Ososayensi bakubonile ukuthi ukuvela, umuntu upholisa ubuchopho futhi athuthukise ukusebenza kwawo.
Umuntu ngamunye akagcini ngeminwe yeminwe kuphela, kodwa futhi nolimi.
Uma umomotheka kabili kuphela ngosuku, unganciphisa umfutho wegazi futhi wehlise nengozi yokuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo.
Kunama-syndromes wezokwelapha athakazelisa kakhulu, njengokufakwa kokubona kwezinto. Esiswini sesinye isiguli esiguliswa yile mania, kwatholakala izinto ezingama-2500 zakwamanye amazwe.
Izidakamizwa eziningi ekuqaleni zazithengiswa njengezidakamizwa. Isibonelo, i-Heroin ekuqaleni yayithengiswa njengomuthi wokukhwehlela. Futhi i-cocaine yatuswa odokotela njenge-anesthesia futhi njengendlela yokukhuthazela okwandayo.
Odokotela bamazinyo bavele muva nje. Emuva ngekhulu le-19, kwakuwumsebenzi wezinwele ezejwayelekile ukukhipha amazinyo anesifo.
I-vibrator yokuqala yasungulwa ngekhulu le-19. Wayesebenza enjini enukayo futhi wayehloselwe ukwelapha i-hysteria yabesifazane.
I-Polyoxidonium isho izidakamizwa ze-immunomodulatory. Isebenza ezingxenyeni ezithile zamasosha omzimba, ngaleyo ndlela inomthelela ekwandeni kokuqina kwe.
Ukuze ugweme imiphumela emibi evela ekusetshenzisweni kwe-Lizpro insulin, kufanele ulandele imiyalo ngokuqinile ngalo muthi.
Umthamo wesidakamizwa uncike ezicini eziningi. Lokhu kuthinta ubudala besiguli, uhlobo lwalesi sifo kanye nobukhali baso, izifo ezifanayo, njll. Ngakho-ke, ukunquma umthamo kuwudokotela odokotela.
Kepha uchwepheshe kungenzeka ukuthi unephutha, ngakho-ke inkambo yokwelashwa kufanele ibhekwe ngokuhlola njalo ushukela wegazi nokulungisa irejimeni yokwelashwa. Isiguli kufanele futhi sinake impilo yaso futhi sazise udokotela ngayo yonke imiphumela emibi yomzimba kulo muthi.
I-Humalog iphathwe ngokungahambi kahle. Kepha ngokungafani nezidakamizwa eziningi ezifanayo, imijovo ye-intramuscular nayo ivunyelwe, kanye nokungenisa kwe-insulin emthanjeni. Imijovo ye-Intravenous kufanele yenziwe ngokubamba iqhaza komhlinzeki wezempilo.
Izindawo ezifanele kakhulu zemijovo engaphansi yindawo yamathanga, indawo yamahlombe, amabhuzu, i-anterior esiswini sesibeletho. Ukwethulwa kwalesi sidakamizwa endaweni efanayo akuvunyelwe, ngoba lokhu kudala i-lipodystrophy. Ukuhamba njalo ngaphakathi kwendawo ebekiwe kuyadingeka.
Ukufakwa kufanele kwenziwe ngasikhathi sinye sosuku. Lokhu kuzovumela umzimba ukuthi uvumelane nezimo futhi unikeze ukuvezwa okuqhubekayo kwe-insulin.
Kubaluleke kakhulu ukucabanga ngezinkinga zempilo zesiguli (ngaphandle kwesifo sikashukela). Ngenxa yezinye zazo, umphumela wale nto ungasontelwa phezulu noma phansi. Kulokhu, kuzofanela uphinde ubale ukubala umthamo. Ngokuhlobene namanye ama-pathologies, udokotela angavimbela ukusetshenziswa kweHumalog.
Isifundo sevidiyo yesirinji:
Izici zokusebenzisana nezinye izidakamizwa
Isici esibaluleke kakhulu sanoma yimuphi umuthi ukuhambisana kwawo nezinye izidakamizwa. Odokotela bavame ukuphatha ama-pathologies amaningana ngasikhathi sinye, ngenxa yalokho okudingekayo ukuhlanganisa ukwamukelwa kwemithi ehlukene. Kuyadingeka ukuhlela ukwelashwa ukuze izidakamizwa zingavimbeli ukusebenza komunye nomunye.
Kwesinye isikhathi kunesidingo sokusetshenziswa kwezidakamizwa ezingaphambukisa isenzo se-insulin.
Ithonya layo liyathuthuka uma, ngaphezu kwakho, isiguli sithatha izinhlobo ezilandelayo zomuthi:
Uma ungakwazi ukwenqaba ukuzithatha, kufanele wehlise umthamo we-Humalog owethulwe.
Izinto ezilandelayo namaqembu ama-ejenti angawenza buthaka umphumela womuthi okukhulunywa ngawo:
izidakamizwa ze-hormonal zokuvimbela inzalo,
Ngenxa yalezi zidakamizwa, ukusebenza kweLizpro kungancipha, ngakho-ke udokotela kuzodingeka ukuthi ancome ukunyuka komthamo.
Ezinye izidakamizwa zinemiphumela engalindeleki. Bayakwazi ukukhuphula futhi banciphise umsebenzi wento esebenzayo. Lokhu kufaka i-Octreotide, iPentamidine, i-Reserpine, i-beta-blockers.
Izindleko nokufana kwezidakamizwa
Ukwelashwa nge-Insulin Lyspro kuyabiza. Izindleko zephakethe elilodwa lomuthi ziyehluka kusuka kuma-ruble ayi-1800 kuya kwangama-200. Kungenxa yezindleko eziphakeme ukuthi kwesinye isikhathi iziguli zibuze udokotela ukuthi afake lesi sidakamizwa nge-analogue yaso ngezindleko ezingabizi kakhulu.
Kunezichazi eziningi zalo muthi. Zifanekiselwa izinhlobo ezahlukahlukene zokukhululwa, zingahluka ekwakhiweni kwazo.
Phakathi kokusemqoka kungashiwo ukuthi:
Ukukhethwa kwezidakamizwa ukufaka esikhundleni salolu hlobo lwe-insulin kufanele kunikezwe uchwepheshe.
Umthamo weHumalog Mix 50 unqunywa udokotela uqobo, kuye ngezidingo zesiguli. IHumalog® Mix 50 ingahanjiswa ngokushesha ngaphambi kokudla, futhi uma kunesidingo, ngemuva kokudla. Umuthi kufanele uphathwe ngokungaziphathi kuphela! Ukuphathwa okuphathelene nomuthi i-Humalog Mix 50 contraindified. Izinga lokushisa lomuthi olungiselelwe kufanele libe lokushisa lasekamelweni. Uhlobo lokuphathwa kwe-insulin umuntu ngamunye!
Imijovo engezansi kufanele inikezwe ehlombe, ethangeni, entanjeni noma esiswini. Izindawo zokujova kumele ziguqulwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe kungabi ngaphezu kwenyanga.
Ngokuphathwa kwe-Humalog® Mix 50 engu-subcutaneous, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuze kungangeni emgodini wegazi ngesikhathi sokujova. Ngemuva komjovo, indawo yomjovo akufanele ihlanjululwe. Iziguli kufanele ziqeqeshelwe inqubo efanelekile yokulimala.
Isikhathi somuthi singase sehluke kakhulu kumuntu kuya kubantu nangezikhathi ezihlukile kumuntu ofanayo. Isikhathi sokusebenza kweHumalog® Mix 50 kuncike kumthamo, indawo yomjovo, ukunikezwa kwegazi, izinga lokushisa nokusebenza komzimba kwesiguli.
Ngokushesha ngaphambi kokusebenzisa, i-Humalog® Mix 50 cartridge kufanele idonswe phakathi kwezandla amahlandla ayishumi futhi inyakaziswe, iphenduke ngo-180 °, amahlandla ayishumi ukuze iphinde ibuyele i-insulin ize ibe nguyunifomu e-turbid. Phinda le nqubo kuze kube yilapho okuqukethwe kuhlanganiswa ngokuphelele. Musa ukuthuthumela ngamandla, ngoba lokhu kungaholela ekubukekeni kwegwebu, okungaphazamisa umthamo ofanele.
Ama-cartridge wedivayisi awavumeli ukuxuba okuqukethwe kwawo namanye ama-insulin ngqo kwikhabethe ngokwalo. Ama-Cartridges awahloselwe ukugcwaliswa kabusha.
Okuqukethwe kwama-cartridges kufanele kuhlolwe njalo, futhi akufanele kusetshenziswe lapho kukhona ama-clots, ama-flakes noma esimweni sokunamathela kwezinhlayiya eziqinile ezimhlophe ezansi noma odongeni lwegobolondo, kuyinika ukuqeda kwe-matte.
Kuyadingeka ukulandela ngokuqinile izincomo zomkhiqizi wepeni ngalinye lesirinji lapho ugcwalisa ibhokisi, unamathisela inaliti, futhi ujova iHumalog® Mix 50.
Khetha isayithi lomjovo.
Khubaza isikhumba esakhiweni somjovo ngokuya ngemiyalo.
Lungisa isikhumba ngokusiqoqa esibayeni esikhulu.
Faka inaliti ngokunqampuna ngokuya ngemiyalo.
Susa inaliti bese usula ngobumnene indawo yomjovo nge-swab yekotini imizuzwana eminingana. Musa ukuyihlikihla indawo yomjovo.
Usebenzisa isivalo sangaphandle senalithi evikelekile, khipha inaliti uyilahle ngokuya ngemithetho yokuphepha.
Kuyadingeka ukuthi kuguqulwe amasayithi womjovo ukuze indawo efanayo ingasetshenziswa kaningi ngenyanga.
ukungabekezelelani komuntu ngamunye ezingxenyeni zomuthi.
Ukuze ubheke izinsalela ze-insulin ebhokisini, udinga ukukhomba umjovo ngensipho yenaliti up ubone inani lamayunithi asele e-insulin esikalini kumgcini we-cartridge obonakalayo.Le nkomba ayisetshenziselwa ukusetha umthamo.
Gcina ku-2-8 ° C esiqandisini, epeni lesirinji / ekhatrijini - kuze kufike kuma-30 ° C amasonto amane. Gwema kude nezingane.
Impilo yeshelf iyiminyaka emithathu.
I-Ultrashort hormone inika umphumela onamandla kunayo yonke. Lapho ushintshela kuHumalog, umthamo wayo wokuqala ubalwa njengo-40% we-insulin emfushane ngaphambili. Ngokwemiphumela ye-glycemia, umthamo uguqulwa. Isidingo esimaphakathi sokulungiswa kwengxenye ngayinye yesinkwa amayunithi ayi-1-1,5.
I-Lyspro insulin njengento esebenzayo itholakala kuphela ku-Humalog yangempela. Izidakamizwa eziseduze nezenzo yilezi (kususelwa ku-aspart) kanye (glulisin). Lawa mathuluzi abuye futhi amafushane kakhulu, ngakho-ke akunandaba ukuthi ukhetha ini. Zonke zibekezelelwa kahle futhi zinikeza ukuncipha okusheshayo koshukela. Njengomthetho, preference inikezwa umuthi, ongatholakala mahhala emtholampilo.
Isifo sikashukela kubantu abadala nasezinganeni, sidinga ukwelashwa kwe-insulin ukuze kulondolozwe amazinga evamile eglucose.
I-Humalog ihanjiswa nge-sc ngendlela yemijovo noma ngendlela yokufakwa kwe-sc okwengeziwe kusetshenziswa iphampu ye-insulin.Uma kunesidingo (i-ketoacidosis, ukugula kakhulu, isikhathi esiphakathi kokusebenza noma isikhathi sokusebenza) I-Humalog ingafakwa ngaphakathi / ngaphakathi.
Ukulungiswa komthamo kungadingeka futhi uma umsebenzi womzimba wesiguli ukhuphuka noma ukuguquka kokudla okujwayelekile. Ukuzivocavoca ngokushesha ngemuva kokudla kwandisa ingozi ye-hypoglycemia. Umphumela we-chemacodynamics of okusheshayo osebenza njenge-insulin analogue ukuthi uma i-hypoglycemia ikhula, ingakhula ngemuva kokulimala ngaphambi kwalokho lapho kufakwa i-insulin yomuntu enganyibiliki.
Izimpawu: hypoglycemia, ehambisana nalezi zimpawu ezilandelayo: i-lethargy, ukukhuphuka kokujuluka, i-tachycardia, ikhanda, ukuhlanza, ukudideka.
Ukwelashwa: Izimo ezinobunzima ze-hypoglycemia zivame ukumiswa ngokufaka ushukela noma olunye ushukela, noma imikhiqizo equkethe ushukela.
Ukulungiswa kwe-hypoglycemia enobunzima obukhulu kungenziwa ngosizo lwe / m noma s / c ukuphathwa kwe-glucagon, kulandele ukudonsa kwe-carbohydrate ngemuva kokuqina kwesimo sesiguli. Iziguli ezingaphenduli i-glucagon zinikezwa isixazululo se-iv dextrose (ushukela).
Uma isiguli sikhubazekile, i-glucagon kufanele ihanjiswe / nge / m noma s / c. Uma kungabikho i-glucagon noma uma kungekho ukusabela ekuphatheni kwayo, kuyadingeka ukwethula isisombululo esibuhlungu se-dextrose (ushukela). Ngokushesha nje ngemuva kokuphaphama, isiguli kufanele sinikezwe ukudla okune-carbohydrate eningi.
Ukudonswa kwe-carbohydrate eyengeziwe nokuqapha isiguli kungadingeka, njengoba ukubuyela emuva kwe-hypoglycemia kungenzeka.
Imibandela yokuthengisa emakhemisi.
Kulesi sihloko, ungafunda imiyalo yokusebenzisa umuthi Isi-Humalogue . Inikeza impendulo evela kuzivakashi eziya kusayithi - abathengi balo muthi, kanye nemibono yongoti bezokwelapha ngokusetshenziswa kweHumalog ekusebenzeni kwabo.Isicelo esikhulu ukufaka ngenkuthalo izibuyekezo zakho mayelana nomuthi: umuthi osizile noma ongakusizanga ukuqeda lesi sifo, yiziphi izingqinamba nemiphumela emibi eye yabonwa, okungenzeka ukuthi ayizange imenyezelwe ngumenzi kwisichasiselo. Ama-analoggs we-Humalog lapho kukhona izifinyezo zezakhiwo ezitholakalayo. Sebenzisa ekwelapheni uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela (sincike ku-insulin futhi sincike ku-insulin) kubantu abadala, ezinganeni kanye nangesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa. Ukwakheka kwalo muthi.
Ngokuphambuka kufanele kufakwe ehlombe, ethangeni, entanjeni noma esiswini. Izindawo zokujova kufanele zishintshwe ukuze indawo efanayo isetshenziswe isikhathi esingaphezu kwesingu-1 ngenyanga.Lapho s / ukwethulwa kwesidakamizwa i-Humalog, ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuvikela ukungena nomuthi emgodini wegazi. Ngemuva komjovo, indawo yomjovo akufanele ihlanjululwe.
I-Humalog: imiyalo esetshenzisiwe
1 ml iqukethe:
into esebenzayo: insulin lispro 100 IU / ml,
ababekhona: i-glycerol (glycerin), i-zinc oxide, i-sodium hydrogen phosphate heptahydrate, metacresol, amanzi okujova, isixazululo se-hydrochloric acid 10% kanye nesisombululo se-10% sodium hydroxide 10% ukusungula i-pH.
Isenzo esiyinhloko se-insulin lyspro ngumthetho we-glucose metabolism.
Ngaphezu kwalokho, ama-insulin anemiphumela ehlukile ye-anabolic ne-anti-catabolic yezicubu ezahlukahlukene. Ezicubu zemisipha, kukhona ukwanda kokuqukethwe kwe-glycogen, okunamafutha acid, i-glycerol, ukwanda kokuhlanganiswa kwamaprotheni kanye nokwanda kokusetshenziswa kwe-amino acid, kepha ngasikhathi sinye kwehla kwe-glycogenolysis, gluconeogenesis, ketogeneis, lipolysis, proteinabolism kanye nokukhishwa kwama-amino acid.
I-Lyspro insulin iboniswa ukuqala kwezenzo okusheshayo (cishe imizuzu eyi-15), okukuvumela ukuphathwa ngokushesha ngaphambi kokudla (imizuzu eyi-0-15 ngaphambi kokudla), ngokungafani ne-insulin ejwayelekile (imizuzu engama-30 kuya kwengama-47 ngaphambi kokudla). Isenzo se-insulin lyspro sibonisa ukuqala ngokushesha, sinesikhathi esifushane sesenzo (kusuka emahoreni amabili kuya kwayi-5) ngokuqhathaniswa ne-insulin ejwayelekile.
Izifundo zokwelashwa ezenziwa ezigulini ezinomhlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela zikhombisile ukuthi nge-insulin lyspro, i-postprandial hyperglycemia yehla kakhulu ngokuqhathaniswa ne-insulin yomuntu enganyibiliki.
Njengawo wonke amalungiselelo e-insulin, isikhathi sezenzo ze-lyspro insulin zingahluka ezigulini ezihlukene noma ngezikhathi ezihlukile esigulini esifanayo futhi kuya ngethamo, indawo yomjovo, ukunikezwa kwegazi, izinga lokushisa lomzimba nomzimba.
Kwenziwa izivivinyo zemitholampilo ezibandakanya izingane (iziguli ezingama-61 ezineminyaka emi-2 kuya kweli-11), kanye nezingane kanye nentsha (iziguli ezingama-481 ezineminyaka engu-9 kuye kwayi-19), eziqhathanisa ne-insulin lispro ne-insulle yabantu i-insulin.Izici ze-pharmacodynamic ze-lyspro insulin ezinganeni ziyafana nezabantu abadala.
Lapho isetshenziswa kwimpompo ye-insulin, ukwehla okukhulunywa ngokwengeziwe emazingeni e-glycosylated hemoglobin kwaqapheleka ngesikhathi sokwelashwa nge-lyspro insulin uma kuqhathaniswa nokwelashwa nge-insulin yomuntu e-soluble. Ocwaningweni we-crossover ongaboni ngokuphelele, ukuncishiswa kwe-glycosylated hemoglobin ngemuva kwamasonto angu-12 ekwelashwa kwakungu-0.37% eqenjini le-inspro insulin kuqhathaniswa ne-0.03% eqenjini le-insulin yabantu elinyibilikayo (p = 0.004).
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 ezithola imithamo ephezulu yokuphuma kwe-sulfonylurea, ukungezwa kwe-lyspro insulin kuholela ekwehleni okukhulu kwamazinga e-hemoglobin e-glycosylated. Amazinga weHbAic ancishisiwe kufanele futhi alindelwe namanye amalungiselelo we-insulin, njenge-soluble noma i-NPH.
Izifundo zemitholampilo zikhombisile ukuthi ukwelashwa kwe-insulin neziguli ze-lyspro ezinesifo sikashukela se-1 no-2 kuhambisana nokwehla kwenani leziqephu ze-nocturnal hypoglycemia uma kuqhathaniswa ne-insulin yomuntu e-soluble. Kwezinye izifundo, ukwehla kwenani leziqephu ze-nocturnal hypoglycemia kuhlotshaniswa nokwanda kweziqephu ze-hypoglycemia yasemini.
Impendulo ye-glucodynamic ku-lyspro insulin izimele ekulimaleni kwe-renal noma hepatic. Umehluko kuma-glucodynamics phakathi kwe-insulin lispro ne-insulin ethambile yabantu etholwe ngesikhathi sokuhlolwa kwesitampu se-euglycemic hyperinsulinemic isekelwa ezinhlobonhlobo zomsebenzi we-renal. ILyspro insulin iye yaboniswa ilingana ne-insulin yomuntu, kepha isenzo sayo sishesha futhi sihlala isikhathi esifushane.
Ezigulini ezihluleka ukwehluleka kwezinso, izinga eliphezulu lokufakwa kwe-insulin lyspro liyagcinwa uma liqhathaniswa ne-insulin enganyibiliki yabantu. Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, umehluko we-pharmacokinetic phakathi kwe-inspro insulin ne-insulin yomuntu e-solulin ugcinwe ngaphezulu kwezinhlobo eziningi zomsebenzi wezinso, kungakhathalekile ukuthi umsebenzi wezinso. Ezigulini ezine-hepatic insuffence, izinga eliphezulu lokufakwa kanye nokuqedwa kwe-insulin ye-lyspro kugcinwa kuqhathaniswa ne-insulin evamile yabantu.
Ukwelashwa kweziguli ezinesifo sikashukela esidinga i-insulin ukugcina i-glucose homeostasis evamile. IHumalog® nayo ikhonjiswa ekuzinziseni kokuqala kwesifo sikashukela.
I-Hypersensitivity kuya ku-insulin lyspro noma yiziphi izingxenye zomuthi. I-Hypoglycemia
Imininingwane evela kwinani elikhulu lamacala okusebenzisa ukukhulelwa ayivelanga noma yimiphi imiphumela engathandeki ye-insulin lispro ekukhulelweni noma empilweni yengane / esanda kuzalwa.
Umgomo wokwelashwa kwe-insulin ngesikhathi sokukhulelwa ukugcina ukulawula okwanele ezigulini ezinesifo sikashukela esincike ku-insulin noma onesifo sikashukela sokukhulelwa. Isidingo se-insulin sivame ukwehla ku-trimester yokuqala futhi sande kuma-trimesters wesibili nowesithathu wokukhulelwa. Abesifazane beminyaka yokuzala izingane ezinesifo sikashukela kufanele bazise udokotela ngokuqala noma ukukhulelwa okuhleliwe. Ngesikhathi sokukhulelwa, iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukuqashwa ngokucophelela kwamazinga kashukela egazini, kanye nokuqapha okujwayelekile komtholampilo.
Ezigulini ezinesifo sikashukela, ukulungiswa kwamthamo we-insulin kanye / noma ukudla kungadingeka ngesikhathi sokuncelisa ibele.